[BERGAMBAR & VIDEO] Pemimpin Pakatan Rakyat Yang Menyertai Black 505 22 Jun
Husam Singgah Di Raub Untuk Solat Maghrib, Penyokong Berkumpul Di IPD Pengkalan Chepa
[BERGAMBAR] Husam Ditahan Polis. Kenapa?
The Waste List
Just Be Silent Or We'll Be Labelled As Ungrateful, Despicable Opposition Members..
စင်္ကာပူ စထရိတ်တိုင်း သတင်းစာမှ ဝီရသူသည် လူသတ်မှုများကို စနစ်တကျ အကွက်ချ ကျူးလွန်နေကြောင်း ဖော်ပြ
BBC News - Singapore mulls legal action over smog from Indonesia fires
Declaring 969aTerrorist Group Internationally will Help Get Myanmar’s Democrtatic Transition Right
Fifty Items To Disappear During An Emergency
Burmese “Buddhist” principal of Elementary School at Nam-ma-tu Town, almost triggered another incident of violence against the Muslims in Burma
END VIOLENCE AGAINST MUSLIMS IN BURMA: NOBEL PEACE PRIZE WINNERS (SAVE BURMA’S Aung San Suu Kyi)
The Voice Weekly’s editor racist Kalar-hater Unethical Kyaw Min Swe denounced Time’s linking of terror with Buddhism in Myanmar
တောင်အာရှနှင့် အရှေ့တောင်အာရှမှ ဗုဒ္ဓဘာသာနှင့် မွတ်စလင်များ ခေါင်းဆောင် ဆွေးနွေးနှီးနှော ဖလှယ်ပွဲကျင်းပ
ဝီရသူ ဘဝင်မြင့်ချက်ကတော့ ၉ လောက်ရှိတယ်
တရားခံ ဘယ်သူလဲဟေ့…. တရားခံ ဘယ်သူလဲဟေ့….
Extremist Myanmar monk lashes out at Time after being called Buddhism’s ‘face of terror’
Singapore smog index exceeds critical level | ABC Radio Australia
[LIVE BLACK 505] VIDEO : Sekitar Perarakan Ke Padang Merbok -updated
ဆရာကျော်ဝင်းနှင့် အင်တာဗျူး – မြန်မာ နိုင်ငံရဲ့ ပကတိအခြေအနေ သုံးသပ်ပေး
Posted: 22 Jun 2013 10:38 AM PDT
Berikut ialah beberapa foto yang merakamkan beberapa pemimpin Pakatan Rakyat yang hadir pada himpunan Black 505 yang berlansung di Padang Merbok petang 22 Jun.
VIDEO UCAPAN PEMIMPIN NGO DAN PR DI PADANG MERBOK !
hemmmmm..... ini lah yang ditakuti oleh peminpin umno serta isi perut umno bila melihat perhimpunan rakyat yang datang tanpa dipaksa atau suka rela... yang mana perhimpunan seperti ini tidak pernah dia orang dapat kecapi melainkan dengan memberi imbuhan serta paksaan... kah kah kah... umporno perkasam jati betul-betul meloyakan heeeee... A B U. - inderasipejuang
Posted: 22 Jun 2013 06:32 AM PDT
Posted: 22 Jun 2013 08:05 AM PDT
Jam 7:30 malam tadi rombongan Polis yang membawa Dato' Haji Husam Musa pulang ke IPD Pengkalan Chepa berhenti untuk solat Maghrib di Balai Polis Raub.
Alhamdulillah dalam keadaan kurang sihat (demam) Dato' Haji Husam Musa tidak digari & beliau diberi Penghormatan mengimami solat Maghrib manakala para Pegawai Polis yang mengiringi beliau menjadi makmum.
Mohon para penyokong Dato' Haji Husam Musa untuk berkumpul dihadapan IPD Pengkalan Chepa bermula jam 11:00 malam ini untuk menyatakan sokongan & solidariti pada beliau. -fb
Intan itu tetap intan yang berharga walau di dalam keadaan apa dan dimana sekalipun ia berada...
Itulah hukum kebenaran dan keadilan. Ditinggikan darjat orang beriman dan berilmu itu dengan beberapa darjat dari yang lainnya.
Husam dibawa ke IPD Pengkalan Chepa
Ia dipercayai ada kaitan dengan kenyataannya mengenai 'syahid fi sabilillah' berhubung penyertaan pada himpunan aman Black 505 di Padang Merbok hari ini.
Dalam perkembangan lain, penyokong Pakatan Rakyat akan berkumpul di IPD Pengkalan Chepa bermula jam 11:00 malam ini. - HD
Posted: 22 Jun 2013 06:46 AM PDT
Naib Presiden PAS Datuk Husam Musa ditahan oleh polis hari ini di Pandan.
Menurut Husam, beliau percaya penahanannya bertujuan untuk menghalang beliau menghadiri perhimpunan bagi membantah dakwaan penipuan dalam Pilihan Raya 2013.
"Saya ditahan di Pandan tadi lebih kurang jam 4.00 petang. Sekarang ini saya berada di IPD Ampang," kata Husam apabila dihubungi oleh The Malaysian Insider merujuk kepada Ibu Pejabat Polis Daerah Ampang.
"Saya diberitahu oleh polis, mereka menahan saya kerana pihak polis Kelantan mahu saya ditahan. Tapi saya berada di Kelantan sejak tiga hari lalu takde pula yang menahan saya," tambahnya.
Baru-baru ini, Husam mengeluarkan kenyataan menggesa penyokong dan ahli PAS untuk menyokong perhimpunan Black 505.
"Andai kata kita terkorban, atau satu daripada kita terkorban, insya Allah ia adalah syahid fi sabillah," kata Husam disiarkan pada 18 Mei oleh Harakahdaily. -TMI
Dato Husam sekarang dalam perjalanan ke IPD Kota Bahru. Di iringi4kereta polis dan lebih dpd 10 pegawai polis. Ditahan berkenaan ucapan di ketereh pd 12.6.13. Disiasat utk hasutan dibawah s4(1) Akta Hasutan. OTW ke IPD Kota Bahru sekarang
Penahanan Husam adalah "Saya diberitahu oleh polis, mereka menahan saya kerana pihak polis Kelantan mahu saya ditahan"!
Mengapa Husam tak ditahan di Kelantan tetapi menahannya sewaktu beliau di Kuala Lumpur?
Kedua, motif penahanannya diragui. Jika perkataan Husam seperti yang tersiar di Harakahdaily itu menjadi penyebab kepada penahanannya, maka jelas pihak yang menahannya tidak tahu dan tidak faham perkataan "INSYA ALLAH".
Husam "tidak berfatwa", tetapi Husam menyatakan pendapatnya, maka itu ada perkataan "INSYA ALLAH" dilafazkan.
"Andai kata kita terkorban, atau satu daripada kita terkorban, insya Allah ia adalah syahid fi sabillah,"
Apabila beliau mengeluarkan pendapat, bermakna ia bukan hasutan dan tidak boleh lansung didakwa dibawah Akta Hasutan.
Simply incredibly unbelievable!
Click here to see THE WASTE LIST.
Posted: 22 Jun 2013 02:47 AM PDT
At times, we must not forget to appreciate those bloggers ( BN/ PR ) who are willing to stick their necks out to dare inform us of what is going on under our trusted, beloved UMNO/BN leaders whom we hold in high esteem.
Yesterday it was about http://apanama2020.blogspot.com/2013/06/khazanah-wants-national-monument-too.html
A loyal pro BN blogger, he seems to be unpretentious..and if something is not right, he'll speak his mind..tactfully.
Today we have http://sakmongkol.blogspot.com/2013/06/the-great-economic-transformation.html
An opposition blogger and DAP MP, Dato' Ariff writes well researched facts which can be very shocking, but mostly true..
And also http://kadirjasin.blogspot.com/2013/06/putera-mahkota-baru-dunia-niaga.html
I didn't finish reading..It was already disheartening enough..
Dato' Kadirjasin writes straight to the point without any frills..and it can be painfully stabbing.
Obviously, our Khalifah is abusing his position as the PM of Malaysia.
He is not at all perturbed with all the various complaints hurled at him for being an incompetent leader..*who cares..I'm the big boss!*
Maybe UMNO members who are daring enough must make sure he gets dethroned as UMNO president this UGA/PAU.
Do we have to tolerate all these and be submissive?
Must we stay obedient and say that like it or not DSN is our Khalifah..he knows what he's doing!
Are we going to let the opposition do all the donkey work for us and be safely satisfied that we are not the ones having to do some serious spring cleaning jobs ourselves?
Or, whatever we hear/read are forever lies and spins to discredit our UMNO/BN leaders!
စင်္ကာပူ စထရိတ်တိုင်း သတင်းစာမှ ဝီရသူသည် လူသတ်မှုများကို စနစ်တကျ အကွက်ချ ကျူးလွန်နေကြောင်း ဖော်ပြ။ ကမ္ဘာ့ မီဒီယာ တွေက မျက်နှာမလိုက် ဘက်မလိုက်ပဲ ရေးသားပါတယ်။မြန်မာမီဒီညာ တွေဟာ ဘယ်တော့မှ အာရှ အဆင့် မီဒီယာ ဘဝကို မရောက်နိုင်ပါဘူး။ရွံ့စရာကောင်းလောက်အောင် မမျှတ လို့ ။
မကောင်းဆိုးရွာကောင်ကြီးများ ပြသနာ မီးမွေးနေ သော မြန်မာပြည် ဟု ခေါင်းစဉ် တပ်ကာ -
သင်္ကန်းဝတ် ဦးဝီရသူ ဦးဆောင် သော အဖွဲ့ သည် ၂၀၀၃ ဒီပဲရင်း အရေးအခင်းမှာ (အမေစုကိုလုပ်ကြံခဲ့သော) လူသတ်ခဲ့တဲ့မကောင်းဆိုးဝါးများ နှင့် ပူးပေါင်းကာ – ၂၀၁၂-၂၀၁၃ တွင် လားရှိုး၊ မိတ္ထီလာ တို့တွင် စနစ်တကျကြိုတင် စီစဉ် ကာ လူသတ်မှု များ ကို ဆက်တိုက် ကျူးလွန်နေကြကြောင်း သက်သေများရှိကြောင်း (MONSTERS OF MYANMAR ) ဟုခေါင်းစဉ် တပ်ကာ စင်ကာပူထုတ် စထရိတ်တိုင်မ်း သတင်းစာ မှ တရားဝင် ကြေငြာ ရေးသားခြင်း(((တိုင်းပြည်ရဲ့ အမှိုက် သရိုက် ဦးဝီရသူက နိုင်ငံအကျိုး ကို နှစ်ပေါင်းများ စွာ အလုပ် လုပ်ပြနေသော ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကို သဲကြီးမဲ ကြီး ဘာကြောင့် လုပ်ကြံ သလဲ – အဖြေကို ဒီမှာ ကြည့်ပါ။)))
မြန်မာ ဒီမိုကရေစီ ပြောင်းလဲရေး ကို ဖျက်ဆီးရန် အုပ်ကြားမျက်ပေါက် မကောင်းဆိုးရွား များဥပဒေ ကို ချိုးဖေါက်ကာ ပစ်မှု တွေ ကိူ စနစ် တကျကျူး လွန် နေကြပြီ။
မီးရွှံ့လူသတ်မှုများ ဖြင့် ဘာသာရေး အဓိကရုန်း များ ဖြစ် နေသော လားရှိုး မြို့ရှိ – ရှမ်းလူမျိုး ရဟန်းသံဃာတော် များ က မြို့ခံ လူထု ကို လူမျိုးမရွေး ဘာသာ မရွေး အကူညီပေး ကယ်တင်ပေးနေခဲ့ ပါသည်။
လားရှိုး၊မိတ္ထီလာ တို့ တွင်ဖြစ် ခဲ့ သော ဖြစ် ရပ် များတွင် မြို့ခံ လူထု ၏ သက်သေ များ အရ – ဦးဝီရသူ မှ စတင်ကာ မုန်တီးရေး ဟောပြော မှု များ ကို ပြု လုပ် အပြီးတွင် – စနစ် တကျ ဖွဲ့ စည်းထားသော – လူသတ် အဖွဲ့– ယခင် ဒေါ်အောင် ဆန်းစုကြည်ကို ၂၀၀၃ တွင် သတ်ဖြတ်ရန် ကြံစည် ခဲ့ သော ဒီပဲ ရင်း အဖွဲ့ နှင့် ပုံစံတူ မကောင်းဆိုးရွား များရောက်ရှိ လာ ပြီး စနစ် တကျ တိုက် ခို်က် သတ်ဖြတ်ကြသည် ဟု သက်သေ များ ရရှိပါသည်။
ထို လူသတ် အဖွဲ့ကို တောင်သာ တပ်မ ဟု၎င်း စွမ်းအားရှင် ဟု ၄င်း ခေါဝေါ်ကြပါသည်။ ယခင်အစိုးရ၏ လက်ကျန် တောက်ငာ မြို့ ခံ ဦးအောင်သောင်း ၏အမာ ခံ အဖွဲ့ ဟု လူသိများပါသည်။
ထို အဖွဲ့ များ၏ စနစ်တကျ သတ်ဖြတ် တိုက်ခို်က် မှု များ နှင့် ၉ ၆၉ အဖွဲ့ ကိ ခေါင်းဆောင်နေသော ဦးဝီရသူ ၏ မုန်းတီးရေး ဟောပြော မှု များ ဆက်စပ် ကာ တဆက် ထဲ ပူပေါင်းလုပ်ကြံ နေသည်ကို သက်သေ များ အရ သိရှိ နေပါသည်။
ထိုလုပ်ရပ် များသည် သမတ ဦးသိန်းစိန် နှင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် တို့ ၏ ဒီမိုကရေစီ အသွင် ပြောင်းရေး ကို လွန်စွာထိခိုက်စေ ပါသည်။
Solonight Emparor shared မတစ်ထောင် တစ်ကောင်ဘွား's photo.
Old monsters stirring up trouble ******************* Some say gangs from past regime provoked clashes to undermine Myanmar's democracy
Firefighters extinguishingafire duringariot between Buddhists and Muslims in Lashio township last Wednesday. Some observers believe organised mobs are injected into towns to target Muslims. — PHOTO: REUTERS
Two days of violence this past week that may have left up to eight dead – the official figure remains at two – in sleepy Lashio in Shan state further defined an emerging pattern to the bloodshed rocking Myanmar in recent months: Organised mobs are injected intoatown to target Muslims.
Who is behind this remainsasubject of speculation but the episodes are challenging the government's ability to maintain law and order. More importantly, they areasevere test of Myanmar's experiment with democracy inamulti-ethnic, multi-religious society.
Ahead of this week's World Economic Forum in Naypyidaw, the army has again been deployed to enforce order in the northern town of Lashio.
That underlines the contradictions that can baffle outsiders expecting clear answers fromacomplex country that has been at war externally and with itself, in some form or the other, for decades.
Shan Buddhists have no issues with Muslims living in the northern state. Shan monks in Lashio sheltered Muslims last week to save them.
A group of Shan monks stated that it was Burmans who perpetrated the violence, not Shan. The man who started it all, allegedlyaMuslim, by setting fire toaBuddhist woman was notalocal, real residents say.
They say the mobs which suddenly showed up and started smashing Muslim homes, shops,amosque and an orphanage were outsiders too.
Residents of Meikhtila say outsiders were also behind violence there in March, when more than 40 people were killed. Outsiders were also the perpetrators in Bago when riots hit that township days later.
Security sources in Myanmar say the mobs are mainly men from the Swan Arshin –aloose cadre of thugs, criminals and ex-convicts used by the old military regime to intimidate and break up protests. Swan Arshin means "masters of power" or "possessors of power".
Squads of Swan Arshin are believed to have been among those who attacked opposition politician Aung San Suu Kyi's convoy at Depayin in 2003. They were also active in breaking up protests in Yangon in 2007 until the army was deployed.
A 2008 paper by the independent Asian Human Rights Commission says: "While the group's existence and activities have been known, it is not an officially recognised organisation. It does not feature in the state media and has no public face."
It was thenatool of the pro-military Union Solidarity and Development Association which evolved into the Union Solidarity and Development Party (USDP) which is now the ruling party. The USDP recently however flatly denied it had anything to do with the Swan Arshin.
A newer "Buddhist militia" called the Taung Tha army has also apparently appeared, according to the sources. Taung Tha isatown which happens to be home to the notoriously hardline Aung Thaung,aformer senior general and combat veteran who is nowakey figure in the USDP.
The attacks in Meikhtila and Lashio were well planned and executed. Just days before the Lashio violence, the right-wing Buddhist monk U Wirathu was preaching his characteristic anti-Muslim sermons inatown some 50km away. The Swan Arshin and the Buddhist 969 movement spearheaded by U Wirathu complement each other, Myanmar analysts say.
The security source said the Swan Arshin fire up poor illiterate peasants to swell their numbers – and then wait for an incident to lightamatch to the tinder. The incident could even be staged.
The mobs, well equipped with swords and machetes, iron rods and sledgehammers, are then transported into town to attack Muslims.
It isaruthless but time-honoured tactic to attack an enemy with no accountability, or to create an enemy and then attack them, or just to sow instability and chaos which may then be guided to the benefit of those controlling the mobs.
The tactic is also used to maintain an extra-parliamentary power base,asort of insurance policy if Myanmar's fledgling democracy disintegrates – or becomes stronger and nudges people once in lucrative positions of power to the sidelines
The attack in Lashio drewaswifter government response than the Meikhtila violence in March. Ironically for mostly Western human rights groups and pro-democracy activists clamouring forareduction in the role of the army, the Tatmadaw is back in the streets as the only agency capable of keeping the peace.
Muslims today see themselves as pawns inalarger game designed to rouse Burman Buddhist nationalism, discredit President Thein Sein and Ms Suu Kyi, deflect anti-Chinese sentiment to Muslims, and prove that the army is still required to maintain order.
President Thein Sein has talked tough and warned against extremists derailing the democratic transition. But politics and power in Myanmar have always been ruthless.
Analysts say the President will appear increasingly weak if the old monsters cannot be tamed.
Posted: 22 Jun 2013 01:38 AM PDT
PET+BLOGSPOT is the ONLINE BLOG of the Malaysian Animal-Assisted Therapy for the Disabled and Elderly Association or Petpositive.Our stories are CURRENT, ACCURATE and RELIABLE. We offer both local and foreign news on animals, disability and the elderly. PET+BLOGSPOT was first established in October 2007. Our hits since then
Declaring 969aTerrorist Group Internationally will Help Get Myanmar's Democrtatic Transition Right
June 12, 2013 Dr. Zarni
Over the past year the western media has rightly exposed Myanmar's 969 and its leading spokesperson Wirathu for what they are:astate-backed neo-Nazi ideological campaign andaHitlerite demagogue with substantial following among the tradition-bound Buddhist masse in Myanmar.
Wirathu describes himself as Myanmar's 'bin Laden'.
Professional journalists the world over should go beyond exposing and sensationalizing this hate-soaked nation's new ideological movement against the Muslims.
Asamatter of fact, one of the adherents of 969′s anti-Islam hate ideology, Dr Nyein Chan,aMalaysia's Swinburne University-based Myanmar lecturer in its maths department, has event made and releaseda10-minute YouTube clip calling on Myanmar government to "ban Islam" in Myanmar the way Scientology is banned inanumber of Western countries.
Freedom of speech is not absolute, especially when hatred, racism, violence, eugenics and other anti-human and dehumanizing ideologies are packaged as religious ethos or faith-based patriotism.
Myanmar's 969, which the country's presidential inquiry commission to investigate last year's pogroms against the Rohingyas and other Muslims in Western Burma characterizes as "an economic boycott campaign", should be declaredaterrorist organization with international cells and accordingly banned.
For the recent spill-over of violence against the Burmese Muslims in Malaysia by the adherents of the 969 is an early indication of the group's growing Islamophobic influence among Myanmar diaspora.
According to the sources close to 969, this neo-Nazi "Buddhist" campaign led by extremist monks who operate with complete impunity from Myanmar authorities, is going to be registered asacompany first and later asapolitical party.
Naypyidaw is behind this ideological and political alternative to the resounding looser of the by-elections last April), that is, the ruling Union Solidarity and Development Party.
In the 2nd decade of the 21st century, international bodies and national governments that are waging the 'war on terrorism' such as the United States should not allow this Myanmar neo-Nazi movement to grow and spill over, especially its ability to incite large scale violence against the Muslims
This move internationally will certainly be an important contribution to any attempt to get Myanmar's transition right.
Posted: 22 Jun 2013 12:03 AM PDT
Here's an interesting article by Gaye Levy from HERE:
There are lots of lists floating around the web citing the top items that will disappear followingadisaster or emergency. Heck, I even postedalistacouple of years ago titled 100 Items Likely to Disappear First when the SHTF.
A while, back, however, Tom Sciacca from Camping Survival came up with his own list of 50 things that would disappear from store shelves during an emergency. It isagreat list especially since it is broken down into the categories of Food, Power and Light, Fun, First Aid and more. Today I would like to share that list with you.
Posted: 22 Jun 2013 12:02 AM PDT
Maung Zarni shared Myanmar Chronicle's status.
Daw San San Myint, the Burmese "Buddhist" principal of No,3Basic Education/Elementary School at Nam-ma-tu Town, almost triggered another incident of violence against the Muslims in Burma.
The principal threatened to expelafemale Muslim student – elementary student! – from her elementary school should the latter did not get down on her knees and give her respect the Buddhist way.
She madeaphone call and about 30 "Buddhist" thugs arrived within5minutes after the call.
The police and the army units arrived to preempt the violence.
The principal admitted publicly she was instructed by the higher-ups in the Ministry of Education to behave in the way she did, upon questioning.
နားလည်မှုလွဲမှားခြင်းမှ နမ္မတူမြို့ အန္တရာယ်
၁၉.၆.၂၀၁၃ နေ့က နမ္မတူမြို့ အမှတ်(၃) အခြေခံပညာမူ လတန်းကျောင်း ၏ ကျောင်းအုပ်ဆရာမကြီးက အစ္စလာမ်ဘာသာဝင် ကျောင်းသူတစ်ဦးကို ၎င်းအား လက်အုပ်ချီ ရှစ်ခိုးရမည်ဟု အဓမ္မဖိအားပေးမှုကြောင့် နမ္မတူမြို့ တွင် ဘာသာရေး အဓိကရုဏ်း ဖြစ်ပွားလုနီးပါး ပြဿနာ ကြီးထွား ခဲ့ကြောင်းနှင့် ထိုကိစ္စများကြောင့် ဆူပူမှုမဖြစ်ပွားစေရန် ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များနှင့် တပ်မတော်သားများ အချိန်မီ ထိန်းသိမ်းခဲ့ရကြောင်းလည်း သတင်းရရှိသည်။
ကျောင်းအုပ်ကြီး ဒေါ်စန်းစန်းမြင့်သည် မိတ္တီလာမြို့နယ် မှ ပြောင်းရွှေ့ လာပြီး နမ္မတူမြို့ အမှတ်(၃) အခြေခံပညာမူလတန်းကျောင်းတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်သည်မှာ တစ်နှစ်ခန့်သာရှိကာ ၎င်း၏ ခင်ပွန်းဖြစ်သူမှာ နမ္မတူမြို့နယ်၏ လက်ထောက်ပညာရေးမှူး ဦးစိုးဝင်းဖြစ်သည်။ အထက်ပါကိစ္စရပ်အတွက် အစ္စလာမ် ဘာသာဝင် ကျောင်းသူလေးအား မရှိခိုးနိုင်လျှင် ကျောင်းထွက်လက်မှတ်ယူပြီး ကျောင်းထွက်သွားဟု အကြပ်ကိုင်ရာ ကျောင်းသူလေးမှ အိမ်သို့ ပြန်သွားခဲ့သည်။
ကျောင်းသူလေး၏ မိခင်ဖြစ်သူက ရပ်မိရပ်ဖများအား သူမ၏ကလေး ပညာရေးအတွက် အကူအညီ တောင်းခံ၍ ၎င်းတို့နှင့်အတူ ကျောင်းအုပ်ကြီး ထံ သွားရောက် မေတ္တာရပ်ခံခဲ့ကြသည်။ ကျောင်းအုပ်ဆရာ မကြီး ဒေါ်စန်း စန်းမြင့်မှ ထိုကိစ္စအပေါ် နားလည်မှုလွဲမှား၍ တပ်ဦးကျောင်းမှ သံဃာတော် များအား ဖုန်းဆက် အကြောင်းကြား ခေါ်ယူခဲ့ပါသည်။
ဆရာမကြီး ဖုန်းဆက်ခေါ်ဆိုချိန် ငါးမိနစ်ခန့်အတွင်း ဘုန်းကြီးနှစ်ပါးနှင့်အတူ လက်နက်ကိုင်လူ၃၀ခန့်က ဆိုင်ကယ်များဖြင့် ကျောင်းသို့ရောက်လာခဲ့ သည်။ ဖြစ်စဉ်အပေါ် သံဃာတော်များကပင် "ဘာသာအားလုံးက လွတ်လပ် စွာ ကိုးကွယ်ခွင့်ရှိတာပဲ" ဟု မိန့်ကြားခဲ့ကြောင်းနှင့် ဘုန်းကြီးများ ကျောင်း ၀င်းထဲရှိနေစဉ်မှာပင် ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များနှင့် တပ်မတော်သားများက စောင့် ကြပ်ပြီး လူစုခွဲခဲ့ကြသည်ဟု မြို့ခံတစ်ဦးကပြောသည်။
ကျောင်းအုပ်ဆရာမကြီးကလည်း လက်အုပ်ချီ ရှစ်ခိုးရန်မှာ ပညာရေးဝန်ကြီး ဌာနမှ ညွှန်ကြားချက်အရဟု အကြောက်အကန် ပြောဆိုခဲ့ပါသည်။ လက်နက်ကိုင်လူ၃၀ခန့်မှာ ကျောင်းထဲမ၀င်ခဲ့ကြသော်လည်း ထိုအချိန်က ၃၂မိုင်ရပ်ကွက်နှင့် တောင်ကြားရပ်ကွက်တို့တွင် လူစုပြီး အသင့်အနေအ ထား ရှိနေကြောင်းလည်း သတင်းရရှိသည်။ နောက်ဆုံးအခြေအနေအရ ဆူပူမှုများ မဖြစ်ပွားရန် ဗလီများ၊ ဘုန်ကြီးကျောင်းများနှင့် စာသင်ကျောင်း များတွင် လုံခြုံရေးချထားပြီး မြို့ဝင်မြို့ထွက် လမ်းများကိုလည်း လုံခြုံရေး စောင့်ကြပ် ထိန်းချုပ်မှုများ ရှိနေကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
Posted: 21 Jun 2013 11:56 PM PDT
END VIOLENCE AGAINST MUSLIMS IN BURMA: NOBEL PEACE PRIZE WINNERS (SAVE BURMA'S Aung San Suu Kyi)
Press Release – Nobel Women's Initiative: Nobel Peace Laureates call for end to violence against Muslims in Burma
June 20, 2013 (Ottawa)—Twelve Nobel Peace laureates—including Archbishop Desmond Tutu, Shirin Ebadi, Muhammad Yunus, Tawakkol Karman and Jody Williams—today called for an immediate end to the violence against Muslims and other ethnic minorities in Burma.
The laureate's statement comes on the heels ofawarning by UN High Commissioner for Human Rights that the human rights violations being committed against Muslims in Rakhine state and beyond are "threatening the reform process and requires focused attention from the Government." Navi Pillay wants the Burmese government to allow her office to havea"full mandate" in Burma to investigate human rights abuses.
The 12 laureates support Pillay's call foraUN investigation into the deaths of Muslims in Burma, as well as to investigate on-going violence against the Kachin, the Shan and other ethnic minorities.
In their statement, the laureates note that " …some within Burma are propagatingapolitics of division—and using violence asatool to manipulate feelings of fear and insecurity." They call on the government and other leaders in Burma to make achieving reconciliation "their top priority."
This month marks one year since sectarian violence erupted in Burma's western Rakhine state, and the UN estimates that some 140,000 people remain in camps with little hope of returning home. It has been two years since government forces broke the ceasefire agreement with Kachin forces in northern Burma.
Archbishop Tutu visited Burma earlier this year and was deeply troubled by high levels of violence against ethnic minorities. Additionally, recent political and economic reforms do not appear to benefit the poor and marginalized people of Burma.
"The statement issued by my fellow Nobel Peace Laureates today reflects what I saw when I visited Burma," said Archbishop Desmond Tutu. "I left Burma withaheavy heart. "
Statement – Nobel Peace Laureates: A true democratic future in Burma will require reconciliation
Burma has taken important steps in the past two years to move from decades of repression towardademocratic future. Many, though not all, political prisoners have been conditionally released. Our fellow Nobel Laureate Aung San Suu Kyi was freed from house arrest, and the National League for Democracy now has seats in parliament after contesting last year's by-elections. The government has also taken some positive steps toward economic reform.
However, political and economic reform still hasavery long way to go in Burma. The benefits of economic reform do not extend to Burma's poorest and marginalized groups. And in the atmosphere of uncertainty that accompanies the current changes, some within Burma are propagatingapolitics of division—and using violence asatool to manipulate feelings of fear and insecurity.
Violence against ethnic minorities in Burma continues unabated in some parts of Burma and, sadly, is now moving to others that were previously untouched by such brutality.
Since June 2012, the politics of division has targeted the Muslim minority. Human rights groups allege that 'ethnic cleansing' is being perpetrated on the Rohingya people. The violence, however, against Burma's Muslim population – including the Rohingya – continues, and indeed, has spread from western to central Burma. After hosting Burmese President Thein Sein at the White House last month, President Obama stated that violence against minority Muslims "needs to stop".
Muslims are not alone in the struggle within Burma against brutality. This month marks the 2nd anniversary of renewed fighting between the Tatmadaw and the Kachin Independence Army in Kachin state, located in northern Burma. The Kachins hada17-year cease fire agreement until June 2011 when the Burmese army launchedamilitary offensive against them. High levels of sexual violence against Kachin women are one of many disturbing features of military offensives that are terrorizing civilian populations. In the north as well, there is violence in Shan state with civilians bearing the brunt of loss and suffering.
Inacountry as richly diverse as Burma, the well being of each community depends on an atmosphere of harmony, tolerance and compassion towards all communities. A prosperous and democratic future for Burma requires genuine national reconciliation. We implore political leaders and other influential voices – both in and out of government – to make achieving such reconciliation their top priority.
We deplore all violence and all expressions of intolerance directed against any individuals or communities because of their racial or religious identity. The violence against Muslims, as well as other ethnic groups, must stop immediately. Moreover, we must support and encourage those who speak out and act for peace and reconciliation.
There needs to be an international, independent investigation of the anti-Muslim violence in Burma. It is critically important that the Burmese government show leadership in implementing any recommendations from such an investigation to ensure accountability to end this cycle of violence. We urge President Thein Sein strongly to follow through on the commitment he made to allow the U.N. High Commissioner for Human Rights to open an office in Burma. Having an independent UN body present in Burma to monitor human rights violations is an important step towards realizing the fulfillment of those international human rights principles.
We also call upon the government and the Kachin leadership to take seriously their responsibility to provide the basis foracomprehensive political settlement that ends conflict and allows humanitarian assistance to reach Kachin's 100,000 internally displaced population.
Recently, President Thein Sein said he would release political prisoners "withaview of fostering national reconciliation". We agree that this would be an excellent step towards true reconciliation in Burma. However, we note that thousands of prisoners have been conditionally released. We call on President Thein Sein to drop all charges against political prisoners, in order to allow them to participate in Burma's political reforms without fear of re-arrest.
In the past we were privileged to support Aung San Suu Kyi and countless other courageous Burmese in their struggle for democracy, freedom and human rights. That struggle has enteredanew phase, butastruggle it undoubtedly remains. A Burma where all can enjoy the benefits of freedom is, for the first time in decades,apossibility. However, to attain this goal will require yet more courage andasteadfast commitment to tolerance—and an end to discrimination and violence.
Oscar Arias, Nobel Peace Laureate (1987) – Costa Rica
Posted: 21 Jun 2013 11:48 PM PDT
Maung Zarni shared Pathi Zaw Min Tun's status.
The Voice Weekly's editor racist Kalar-hater Kyaw Min Swe denounced Time's linking of terror with Buddhism in Myanmar as 'in violation of journalistic ethics'.
The Voice has no fcukin' ethics.
His late boss and my old friend Dr Nay Win Maung was an irredeemably Kalar hater who meditated3timesaday as 'a good buddhist'.
"ကျွန်တော်ကတော့ ဒီလိုလုပ်တာကို သိပ်တော့ ဘ၀င်မကျဘူး။ ပုဂ္ဂိုလ် တစ်ဦးတစ်ယောက်ကို ဒီလိုတပ်ပြီး ပြောတာ၊ ဘာသာရေးကို တပ်ပြီးပြောတာက မလုပ်သင့်တဲ့ ကိစ္စပါ။ အကြမ်းဖက် ကိစ္စတွေမှာ သူ့ရဲ့ ပါဝင်ပတ်သက်မှုက ဘယ်လောက် အထောက်အထား ရှိသလဲ၊ ကျွန်တော့်အနေနဲ့ ဒီကိစ္စကို သဘောမတူပါဘူး။ ကြိုက်ခြင်း၊ မကြိုက်ခြင်းကတော့ တစ်ပိုင်းပါ။ ဒီလိုဖော်ပြတဲ့ အတွက် နိုင်ငံနဲ့ ဘာသာရေးအပေါ် သက်ရောက်မှုတွေ ရှိလာနိုင်ပါတယ်။ ကျွန်တော် ထင်တာကတော့ ဒီကိစ္စဟာ သွေးရိုးသားရိုး မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ ဒီလိုဖော်ပြတာဟာ စာနယ်ဇင်းကျင့်ဝတ်နဲ့လည်း မညီပါဘူး။ လူတစ်ယောက် ဂုဏ်သိက္ခာအရ ထိခိုက်သွားအောင် ဘာသာရေးနဲ့ အကြမ်းဖက်မှုတွဲပြီး ပြောသွားတာ ကျင့်ဝတ်နဲ့ မညီပါဘူး။ ဒါမျိုးမလုပ်အပ်ဘူး။ တိုင်းစ် မဂ္ဂဇင်းဆိုတာ နာမည်ကျော်မဂ္ဂဇင်း တစ်စောင်ပါ။"
ဦးကျော်မင်းဆွေ (အယ်ဒီတာချုပ်, The Voice Daily)
Posted: 21 Jun 2013 11:25 PM PDT
ဇွန်လ ၂၀၊ ၂၀၁၃
အရှေ့တောင် အာရှနှင့် အာရှတောင်ပိုင်းဒေသမှ ဗုဒ္ဓဘာသာနှင့် မွတ်စလင်တို့၏ ဆက်ဆံမှုအား မျက်မှောက်ကာလ အဖြစ်အပျက်များနှင့် နှိုင်းယှဉ် လေ့လာခြင်း ခေါင်းစဉ်ဖြင့် ဆွေးနွေးနှီးနှောဖလှယ်ပွဲ ပြုလုပ်
ဘန်ကောက် ။ ။ "Contemporary Issues in Buddhist – Muslim Relations in South and South East Asia" (အရှေ့တောင် အာရှနှင့် အာရှတောင်ပိုင်းဒေသမှ ဗုဒ္ဓဘာသာနှင့် မွတ်စလင်တို့၏ ဆက်ဆံမှုအား မျက်မှောက်ကာလ အဖြစ်အပျက်များနှင့် နှိုင်းယှဉ် လေ့လာခြင်း) ခေါင်းစဉ်ဖြင့် ထိုင်းနိုင်ငံ၊ ဘန်ကောက်မြို့၊ Rissho Kosei- Kai; Bangkok Dharma Centre တွင် ဇွန်လ ၁၅- ၁၇ ရက်နေ့ထိ နံနက် (၈)နာရီမှ ညနေ (၆)နာရီထိ ဆွေးနွေးနှီးနှော ဖလှယ်ပွဲ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
အဆိုပါ ဆွေးနွေးပွဲ အခမ်းအနားသို့ တက်ရောက်လာသူများမှာ မြန်မာပြည်မှ ကိုယ်စားလှယ်နှစ်ဦးဖြစ်သော ရတနာမေတ္တာ ဗုဒ္ဓဘာသာအဖွဲ့၏ ဥက္ကဌ၊ မြန်မာနိုင်ငံ ဘာသာပေါင်းစုံ ငြိမ်းချမ်းရေး အဖွဲ့ဥက္ကဌ ဦးမြင့်ဆွေ နှင့် သီရိလင်္ကာ နိုင်ငံ၊ မလေးရှား နိုင်ငံ၊ အင်ဒိုနီးရှား နိုင်ငံ၊ ထိုင်းနိုင်ငံ၊ ဒေသတွင်းက မဟုတ်သည့် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းတို့ တက်ရောက်ခဲ့ကြကြောင်း သိရသည်။
အဆိုပါ ဆွေးနွေးပွဲသို့ မြန်မာပြည်မှ ကိုယ်စားလှယ် တစ်ဦး အဖြစ် တက်ရောက်ဆွေးနွေးခဲ့သော မြန်မာနိုင်ငံ ဘာသာပေါင်းစုံ ငြိမ်းချမ်းရေး အဖွဲ့မှ အစ္စလာမ့်ဓမ္မ ဗိမာန် ဦးဆောင်ဆော်သြရေးမှူး ဆရာဦးအေးလွင် အား M-Media မှ ဆက်သွယ်မေးမြန်းခဲ့ပါသည်။
"ဇွန်လ ၁၅-ရက်နေ့ ကနေ ၁၇-ရက်နေ့ထိ ဘန်ကောက်မှ မွတ်စလင်နဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များရဲ့လတ်တလော ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ အရေးကိစ္စရပ်များကို ဆွေးနွေးဖို့ ကိစ္စရပ်လေး တစ်ရပ် ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ပူးတွဲ ကျင်းပတဲ့ အဖွဲ့က သုံးဖွဲ့ပါ။ (၁) ထိုင်းအခြေစိုက် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များ၏ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ကွန်ရက်၊ (၂) မလေးရှား အခြေစိုက် တရားမျှတသည့် ကမ္ဘာကြီးဖြစ်စေဖို့ အတွက် အပြည်ပြည် ဆိုင်ရာ လှုပ်ရှားမှု အဖွဲ့၊ (၃) နယူးယောက် အခြေစိုက် မြန်မာပြည် အပါအ၀င် (၉၁)နိုင်ငံ အဖွဲ့ရှိသည့် ဘာသာပေါင်းစုံ ငြိမ်းချမ်းရေး အဖွဲ့တို့ဖြစ်ပါတယ်။ ဆွေးနွေးပွဲမှာ ထိုင်းနိုင်ငံ အခြေစိုက် သီရိလင်္ကာ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ဗုဒ္ဓဘာသာ အဖွဲ့အစည်းမှ ကြိုဆိုနှုတ်ဆက်ပြီး အခမ်းအနား ကျင်းပရခြင်း ရည်ရွယ်ချက်ကို ပြောပါတယ်။ အဲဒီ့နောက် နိုင်ငံအလိုက် လက်တလော ဖြစ်နေတဲ့ အခြေအနေတွေကို တင်ပြကြပါတယ်။"
"မြန်မာပြည် ကိုယ်စား ဥက္ကဌ ဦးမြင့်ဆွေနဲ့ ဆရာတို့ အဓိက ပြောခဲ့ကြတာက- 'ဒီကနေ့ မြန်မာပြည်မှာ ဖြစ်နေတဲ့ ကိစ္စသည် ဘာသာနှစ်ခုရဲ့ ထိပ်တိုက်တွေ့မှု မဟုတ်ဘူး။ ဘာသာနှစ်ခုရဲ့ ပဋိပက္ခ မဟုတ်ဘူး။ ဘာသာနှစ်ခုရဲ့ ပဋိပက္ခဖြစ်အောင် ကြိုးပမ်း အားထုတ်မှု ရှိတယ်။ အဲဒါတွေကို ရေရှည် ရေတို စီမံကိန်းတွေချပြီးတော့ မသိနားမလည်ပဲနဲ့ နားယောင်ပြီး ပါသွားတဲ့သူတွေ နားမယောင်အောင် ပညာပေး စည်းရုံးပြီး အဲလို အဖြေရှာဖို့ ကိစ္စရပ်တွေလုပ်နေပါတယ်။ အဲလို အဖြေရှာတဲ့နေရာမှာလည်း ဘာသာပေါင်းစုံ ငြိမ်းချမ်းရေး (မြန်မာ) အနေနဲ့ ဆုတောင်းပွဲတွေ၊ ဆွေးနွေးပွဲတွေ၊ ဘာသာပေါင်းစုံက လူကြီးတွေနဲ့လည်း တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရတာကလည်း အင်မတန် အရေးပါတယ်။
အဲဒီမှာ ဆရာအနေနဲ့ ဘာတင်ပြခဲ့သလဲဆိုရင် မေလ ၂၃-ရက်နေ့တုန်းက သွားခဲ့တဲ့ မွတ်စလင် ၉၀ရာခိုင်နှုန်းရှိတဲ့ Kosovo (ကိုဆိုဗို) နိုင်ငံမှာ ဆွေးနွေးခဲ့တဲ့ ဘာသာပေါင်းစုံဆွေးနွေးပွဲဆိုတာ တကယ်ပဲ ထိရောက်လား၊ အဓိပ္ပယ် ရှိလား၊ ဘာတွေ လုပ်တာတုန်း၊ အကျိုးနဲ့ အဆိုး သူရဲ့ နည်းပိရိယာယ်တွေ၊ နည်းဗျူဟာတွေ ဘာတွေလဲဆိုတာ ဆွေးနွေးကြတော့ အဲဒီ့ ဆွေးနွေးပွဲရဲ့ ဆောင်ပုဒ်လေးက ဘယ်သူရဲ့ဆောင်ပုဒ်လဲ ဆိုရင် တောင်အာဖရိကက လူမည်း ခေါင်းဆောင် အသားအရောင် ခွဲခြားမှုကို ဆန့်ကျင်ခဲ့တဲ့ နယ်လ်ဆင် မင်ဒရဲလား ရဲ့ဆောင်ပုဒ်ပါ။ သူက ဘာပြောလဲဆိုရင် ဒို့တတွေ စကားပြောကြပြီ ဆိုရင် ပြဿနာ ဖြစ်နေတဲ့၊ ပဋိပက္ခ ဖြစ်နေတဲ့ အချိန်မှာ ပဋိပက္ခကို ဖြေရှင်းဖို့ အတွက်ဆိုရင် မိတ်ဆွေတွေ စကားပြောတာထက်၊ ရန်သူကို စကားပြောဖို့ လိုပါတယ်တဲ့။
ဆရာ အနေနဲ့ ကတော့ ရန်သူ ဆိုတာထက် အထင်အမြင်လွဲနေတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ စကား ပြောဖို့လိုတယ်။ အစည်းအဝေးတက်လာတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုရင် အစ္စလာမ်အကြောင်း သိတယ်၊ မဟုတ်တမ်း တရား စွပ်စွဲ ပြောဆိုနေတယ် ဆိုတာလည်း သိတယ်။ တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် ခင်ခင်မင်မင် မိသားစု စိတ်ဓာတ်က ရှိပြီးသား ဆိုတော့ ကြေကြေလည်လည် ပြောနေစရာ မလိုဘူး။ ဘယ်သူကို ပြောရမှာလဲဆိုရင် အထင်အမြင်လွဲနေတဲ့ သူတွေကို ပြောရမှာ ဖြစ်တယ်။ ရိုးရိုးသားသားနဲ့ နားယောင်သွားတဲ့ သူတွေကို ပြောရမှာ ဖြစ်တယ်။ တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် ထိပ်တိုက် ပဋိပက္ခကို ရှောင်ရှားဖို့၊ သွေးဆောင်ဖြားယောင်တဲ့ သူတွေက မိမိတို့ကို ပဋိပက္ခထဲမှာ ပါဝင်ဖို့ အတွက် သိမ်းသွင်းစည်းရုံးရင်းပဲလဲ နားယောင်ပြီး ပါမသွားအောင်လို့ ဘယ်လိုလုပ်ကြရင် ကောင်းမလဲဆိုတဲ့ အခါကြတော့ အောက်ခြေမှာ ရှိတဲ့ ပြည်သူအထိ ဆင်းမယ်။ ဆင်းပြီး ဟောပြောတာတွေ၊ သင်တန်းပို့ချတာတွေ လုပ်သလို အောက်ခြေ ပြည်သူများရဲ့ ဘ၀ မြှင့်တင်ရေး တွေကို လုပ်မယ်။ ဥပမာ ဆိုရင် အကူအညီ လိုအပ်နေတဲ့၊ ဘေးဖယ်ထားခြင်းခံရတဲ့၊ အရေးတယူ ဆက်ဆံခြင်း မခံရတဲ့ အုပ်စုတွေကို ချည်းကပ်ပြီး သူတို့ရဲ့ ဘ၀ကို တိုက်ရိုက် အထောက်အကူ ပြုမယ့် လူမူရေး၊ စီးပွားရေး၊ ကျန်းမာရေး စတဲ့ဟာတွေကို တနိုင်တပိုင် ထောက်ကူမှုတွေ ပေးရမယ်။ အဲဒီလို လုပ်ပေးရင်းနဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးရဲ့ သတင်းစကားတွေကို ပြောရမယ်။ ငြိမ်းချမ်းရေး သတင်း စကားဆိုတာ ဘာသာအသီးသီးဟာ မေတ္တာတရား ပေါ်မှာ အခြေခံတယ်၊ ငြိမ်းချမ်းရေး ပေါ်မှာ အခြေခံတယ်၊ အဲလို ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ မေတ္တာ တရားပေါ်မှာ အခြေခံတဲ့ ဘာသာတရားတွေမှာ အခုလို ပဋိပက္ခဆိုတာ မရှိသင့်ဘူး ဆိုတာမျိုးတွေ ပြောပြမယ်။ လူကို လူလို့ပဲ မြင်ပြီး ဒို့တတွေဟာ မိသားစုကြီး တစ်ခုလို နေကြရမယ်ဆိုတဲ့ အသိလေးတွေ တကယ့်လက်တွေ့ရသွားအောင် အဲဒီနည်းနဲ့ လုပ်ဖို့ ကြိုးစားနေတယ်လို့ ဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ် "
ဆရာတို့ ဆွေးနွေးခဲ့ကြတဲ့ အထဲမှာ " ဒီပဋိပက္ခမှာ အကျိုးလိုသော ဖုံးကွယ်ထားတဲ့ အစီအစဉ်တွေ ရှိတယ်။ နိုင်ငံရေး၊ စီးပွားရေး၊ ပုဂ္ဂိုလ်ရေး ဖြစ်မယ်။ အဲလို ကိုယ်ကျိုးရှာ အမြတ်ထုတ်ချင်တဲ့ လူတွေက ဘာသာရေး အသွင်သဏ္ဍာန်ဆောင်ပြီးတော့ ဘာသာရေးက ထိလွယ် ရှလွယ်တယ် ဆိုပြီး ဘာသာရေးနဲ့ မှိုင်းတိုက်ပြီးတော့ အသုံးချတယ်။ နောက်ကွယ်က သူတို့ရဲ့ အကျိုးစီးပွား အတွက်။ အဲဒီ့ လူတွေရဲ့ စနက်ကြောင့် ဖြစ်နေတဲ့ အတွက် အဲဒီလူတွေဟာ ခေတ်ပြောင်း၊ စနစ်ပြောင်းတာကို မလိုလားတဲ့ သူတွေက ဒါကို လုပ်နေတယ် သတိထားရမယ် ဆိုတာကို ဆရာတို့က မီးမှောင်ထိုးပြတယ်။ အဲဒါသည် ဘာသာဝင်များရဲ့ ပဋိပက္ခ မဟုတ်သေးဘူး။ သို့သော်လည်းဘဲ အမုန်းတရားတွေနဲ့ အာဃာတတရားတွေနဲ့ ဘာသာတရားရဲ့ လမ်းကြောင်းကနေ ဟောပြောနေတဲ့ ဟောပြောချက်တွေကလည်း ရှိနေတယ်။ စာပေတွေလည်း ဖြန့်ဝေတောတွေ ရှိနေတယ်။ အဲဒါတွေကို နားယောင်ပြီးတော့ စိတ်တွေဝေနေတဲ့ သူတွေဟာ ဒိလို ပဋိပက္ခထဲမှာ အမှတ်မထင် ပါဝင်လာတတ်တယ်" ဟု ထည့်သွင်းဆွေးနွေးခဲ့သည်။
ပထမဆုံး စပြီးဆွေးနွေးတာက ထိုင်းက ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တဲ့ ဒေါက်တာ ဆူးလက် ဖြစ်တယ်။ သူက" ဘာသာရေးဟာ အသုံးချခံနေရတယ်။ အထူးသဖြင့် ဗုဒ္ဓသာသနာမှာ ဒီလို အကြမ်းဖက်မှုတွေ မရှိဘူး " ဟု ထည့်သွင်းပြောကြားဆွေးနွေးခဲ့သည်။
အဲဒီမှာ သီရိလင်္ကာက ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်း " ကျွန်တော်တို့ဆီမှာလည်း ဒီအတိုင်းပဲ နိုင်ငံရေး အရသော်လည်းကောင်း၊ စီးပွားရေး အရသော်လည်းကောင်း အမြတ်ထုတ်ချင်တဲ့ သူတွေက ဒီလိုလုပ်နေတယ် " ဟုထည့်သွင်းဆွေးနွေးခဲ့တယ်။
အင်ဒိုနီးရှားက ပုဂ္ဂိုလ်တွေ ဆွေးနွေးတဲ့ အခါကြတော့ သူတို့နိုင်ငံမှာလည်း တချိန်က အခုလို ဖြစ်ခဲ့တယ်။ ဘာသာပေါင်းစု ချစ်ကြည်ရေး အတွက် ကြိုးစား အားထုတ်နေတယ်။ နောက် သူထပ်ဆွေးနွေးပြောတာက " ခင်ဗျားတို့ ပြောသလို နိုင်ငံရေး အတွက်ပဲ တိုင်းပြည်ကို နောက်ကြောင်း ပြန်ဆွဲချင်တဲ့ အဲဒီ့လူတွေရဲ့ လုပ်ရပ်တစ်ခုတည်းကြောင့်တင် မဟုတ်ဘူး။ ပြည်သူတွေကပါ နည်းနည်းလေး အစွဲ ဥပဒါန်လေးတွေ ရှိနေတာလည်း ဖြစ်နိုင်တယ်။ ဒါကြောင့်မို့ သူတို့ ပါလာတာလည်း ဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့ " ဟု ထည့်သွင်းဆွေးနွေးတော့ ဆရာတို့ကလည်း ပြန်ဆွေးနွေးခဲ့တယ်။
" ဟုတ်တယ်၊ အဲဒီလို အမုန်းတရားတွေနဲ့ မှိုင်းတိုက်ထားတဲ့ အတွက်ကြောင့် နားယောင်နေတဲ့ သူတွေရှိတာတော့ မှန်တယ်။ သို့သော် သူတို့က လူများစုတော့ မဟုတ်သေးဘူး။ အချိန်မှီ ဒါတွေကို ကျွန်တော်တို့က ကာကွယ်ရမယ်" ဟု အပြန်အလှန် ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။
ဆက်လက်ပြီး မလေးရှားဘက်က အဖွဲ့က ဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။ မလေးရှားမှာ ဗုဒ္ဓဘာသာသည် ဒုတိယ အများဆုံး ဘာသာဖြစ်တယ်။ မလေးရှားမှာ နေထိုင်ကြတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဆိုရင် သူတို့ဘာသာကို ဘယ်လို လွတ်လွတ်လပ်လပ် ကိုးကွယ်နေထိုင်ခွင့် ရလဲဆိုတာကို ပါဝါပွိုင့်နဲ့ ဆွေးနွေးပြသခဲ့တယ်။ အဲဒီမှာ ဘုရား၊ ကျောင်းကန် ပုံတွေ အများကြီးပဲ ပြတယ်။ ပြတဲ့ အထဲမှာ ရပ်တော်မူကိုယ်တော်တွေ။ လျောင်းတော်မူ ကိုယ်တော်တွေ၊ စေတီ ပုထိုးပုံတွေ ပြတယ်။ အဲဒီမှာ မြန်မာပြည်က ရှေးအကျဆုံး ပန်းပုပုံလည်းပါတယ်။ အဲဒါတွေ တွေ့တဲ့အခါကြတော့ မလေးရှားလို မွတ်စလင်နိုင်ငံမှာ ဗုဒ္ဓသာသနာဟာ ဒုတိယ လူအများစု ကိုးကွယ်ရာ ဖြစ်တယ်။ သူတို့ ဘယ်လို ဘာသာပေါင်းစုံ၊ လူမျိုး ပေါင်းစုံ ဘယ်လိုလုပ်ကြလဲဆိုတာကို ဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်" ဟု M-Media သို့ပြောသည်။
မြန်မာပြည်မှ ဖိတ်ကြားထားသော ကိုယ်စားလှယ်များမှ သီတဂူဆရာတော် နှင့် ဒေါက်တာဇာနည် တို့ နိုင်ငံခြား ခရီးလွန်နေ၍ အဆိုပါ ပွဲသို့ မတက်ရောက်ဖြစ်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
အဆိုပါ ဆွေးနွေးပွဲမှ ငြိမ်းချမ်းရေး ဖော်ဆောင်နိုင်ရန် အဖြေရှာမှုများအား အပိုင်း (၂)တွင် ထပ်မံ ဖော်ပြသွားပါမည်။
Posted: 21 Jun 2013 10:48 PM PDT
ဘဝင်မြင့်ချက်ကတော့ ၉ လောက်ရှိတယ်။
၀ီရသူကျရင် မြန်မာပြည်ကိုရပြီဆိုပြီးတိုက်ခိုက်တာ တဲ့ …
သေချာတာပေါ့ ၀ီရသူကိုသာမရရင် မြန်မာပြည်လည်း ချီးမြောင်းထဲကျဖို့ရှိတော့တယ် ..
အဲ့ကြောင့် ၀ီရသူကိုပဲ ချီးမြောင်းထဲ အကျခံလိုက်တာ ချုံးကတီးရယ် …
ဂုဏ်ယူစရာမရှိ ကြံဖန်ဂုဏ်ယူနေတယ် … — feeling ဂတုံးဖင် လောက်စလုံးဝင်.
Posted: 21 Jun 2013 10:35 PM PDT
( ဦးဝီရသူကို ကန်ထည့်လိုက်တဲ့ လက်သည် အစစ်ကတော့ ဗိုလ်ရွှေမန်း )
တကယ်တော့ အမေရိကားလို ဥရောပလို ဒေသတွေက နိုင်ငံကြီးတွေက သတင်းထောက်တွေနဲ့ အင်တာဗျူးရင် အရမ်းသတိထားရပါတယ်… အရမ်းလဲ ကြောက်စရာကောင်းပါတယ်၊
သူတို့တတွေက မေးခွန်းတွေကို ဘယ်တော့မှ တိုက်ရိုက်မမေးပါဘူး… ဒါပေမယ် မေးခွန်း ၃ ခုလောက်မေးပြီးရင်တော့ ဖြေထားတဲ့ အဖြေ ၃ ခုကို ပေါင်းရေးလိုက်ရင် အဖြေက တခုတည်းဖြစ်နေတတ်တယ်…၊ အဲ့ဒါက ဒီနေ့သတင်းဌာနကြီးများလောကမှာ အလွန်အသုံးဝင်နေတဲ့ အင်တာဗျူး စနစ် ၊
ဗိုလ်ရွှေမန်းက ပြီးခဲတဲ့ ရက်ပိုင်းအတွင်းတွေတုန်းက အမေရိကန်နိုင်ငံမှာ တော်တော်လေး အင်တာဗျူးတွေ လုပ်ခဲ့ပါတယ်…၊
မြန်မာပြည်မှာက ရခိုင်ပြည်နယ်အရေးလူသတ်မှု့၊ မိတ္ထီလာအရေးလူသတ်မှု့၊ ဥက္ကံအရေးလူသတ်မှုတွေနဲ့ ထိုနယ်တွေအပါအ၀င် လာရှိုးပဋိပက္ခအစရှိသည်တို့ မီးရှို့မှုတွေက မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ကမ္ဘာ့သတင်းတွေက ကြီးစိုးထားခဲ့သလို့….၊
ကမ္ဘာကျော် အကြမ်းဖက် လူသတ်မှု့တွေထဲမှာ အရင်က မွတ်စလင်အကြမ်းဖက်များက ခေါင်းဖြတ်သတ်မှု့၊ သေနတ်နဲ့ နားထင်ကိုတေ့ပြီး ပစ်ခတ်သတ်မှု့၊ အမဲနိုင်ငံတခုမှာ အဖိုးကြီးနှင့် အဖွားကြီး ၂ ဦးကို အရှင်လတ်လတ် မီးရှို့သတ်မှု့ တွေက ကမ္ဘာကြီးကို အံသြတုန်လှုပ် မုန်းတီးစက်ဆုတ်စရာအဖြစ် တည်ရှိခဲ့သော်လည်း…အဲ့ဒါတွေက ၁၀ စုနှစ်နီးပါးလောက် ကျန်ခဲ့သလိုရှိနေစဉ်မှာ…၊
ဗုဒ္ဓဘာသာ မြန်မာနိုင်ငံမှာ အရှင်လတ်လတ် တောင်ကုတ်မှာ ရဲတင်းနှင့် ခေါင်းကို ခုတ်ပိုင်းပြီး သတ်ဖြတ်မှု့များ၊ မိတ္ထီလာမှာ အရှင်လတ်လတ် တုတ်များနှင့် အလဲအကွဲရိုက်ပြီး အရှင်လတ်လတ် မီးရှို့သတ်ဖြတ်တာတွေက ကမ္ဘာ့သတင်းစာမျက်နှာတွေပေါ်မှာ လွန်ခဲ့တဲ့ ၁၀ နှစ်ကျော်က အာဖဂန်နိုင်ငံလို ကြောက်စရာကောင်းတဲ့ အစွန်းရောက်တွေ ကြီးစိုးတဲ့ မြန်မာပြည်အဖြစ် ထိတ်လန့်တုန်လှုပ်စရာ မြန်မာပြည်အဖြစ် အမည်းဆိုးနဲ့ ချက်ချင်းလက်ငင်း ကြော်ကြားလာပါတော့တယ်…၊
အဲ့ဒီ ဗွီဒီယို ဖိုင်တွေကိုတော့ ထောက်လှန်းရေးတွေကပဲ ကင်မရာကောင်းကောင်းတွေနဲ့ အဝေးကနေဆွဲရိုက်ပြီး လိုချင်တဲ့အနေအထားတွေ ဖေါ်ပြ၍ လိုအပ်ပါက တရာခံပြသက်သေအဖြစ် အသုံးချဖို့ အင်တာနက်တွေပေါ်မှာ ပြန်တင်ပေးခဲ့တာပါပဲ ၊
ဒီကြားထဲမှာ အမျိုးသားရေးကို ဘန်းပြပြီးတော့ အာဏာတည်မြဲရေး လုပ်ဆောင်နေကြတဲ့ စစ်အုပ်စုရဲ့ ယုတ်မာမှု့တွေကြောင့် ဘုန်တော်ကြီးများရဲ့ ဘာသာရေးလုပ်ဆောင်မှု့တွေနှင့် ( ၉၆၉ ) ဘာသာရေး ၀ံသာနုလုပ်ရှားမှု့တွေကို ကာဗာယူပြီး နိုင်ငံရေးတတ်သိနားလည်သူတွေ အခြေအနေတွေကို သဘောပေါက်နေသူတွေကို အပြောခက်အောင် ဘုန်းကြီးဒိုင်းနဲ့ မိုက်ရိုင်းခဲ့ကြတာကို ကောင်းကောင်းတွေ့မြင်နေခဲ့ရပါတယ်….၊
ဘုန်းကြီးဒိုင်းကိုင်ဆောင်သူ အမျိုးသားရေး လုပ်ကြံသူများက လူသတ်မှု့တွေပြုလုပ်ပြီး ကြေညာသွားတာ ၉၆၉ ၊ လူတွေကို အရှင်လတ်လတ် မီးရှို့သတ်ပြီး ကြေညာသွားတာ ၉၆၉ ၊ ရပ်ကွက်ကြီးလိုက် ပြာကျသွားအောင် မီးတွေရှို့ပြီး ကြေညာသွားတာ ၉၆၉ ၊ အဲ့ဒီလိုနဲ့ ကမ္ဘာကျော်တဲ့ လူဆိုးကြီးအဖြစ် ၉၆၉ ဟာ အမည်ဆိုးကြီးနဲ့ ကျော်ကြားလာခဲ့ပါတော့တယ်….၊
ဗိုလ်ရွှေမန်းက အမေရိကန်ကို ရောက်တော့ သတင်းဌာန ဗျူးဆရာကြီးတွေက ၁ = အရှင်လတ်လတ် မီးရှို့သတ်ဖြတ်ခံရမှု့တွေက ဘာကြောင့်လဲလို့မေးလိုက်တယ်…
ဗိုလ်ရွှေမန်းဖြေပြသွားတာက လူတစုရဲ့ အကြမ်းဖက် ဘာသာရေး လှုပ်ရှားမှာတွေကြောင့်…တဲ့၊
၂ = သတင်းဌာနတွေကမေးတယ်… ( ၉၆၉ ) က ဘယ်သူတွေဦးစီးတာလဲတဲ့ …. ဗိုလ်ရွှေမန်းကဖြေတယ်… ဘုန်းတော်ကြီးတွေပါတဲ့…..၊
၃ = အကြမ်းဖက်တဲ့ ဘယ်လိုအဖွဲ့အစည်းတွေကို အရေးယူဖို့ ဆုံဖြတ်ထားလဲတဲ့…၊ ဗိုလ်ရွှေမန်းက ဖြေတယ်… ( ၉၆၉ )တွေကိုတော့ အရေးယူဖို့ အမိန့်ပေးထားခဲ့ပါပြီးတဲ့၊
အဲ့ဒီ အဖြေ ၃ ခုကို တခုတည်းပေါင်းစပ်လိုက်တော့….
လူတစု အကြမ်းဖက် ဘာသာရေးလှုပ်ရှားမှုတွေကြောင့် ဘုန်းတော်ကြီးတွေပါတဲ့ ( ၉၆၉ )တွေကိုတော့ အရေးယူဖို့ အမိန့်ပေးထားခဲပါတယ်…..တဲ့ ဗျာ…..။
တရားခံ ဘယ်သူလဲဟေ့…. တရားခံ ဘယ်သူလဲဟေ့….။
( ဦးနိုင်ဝင်း လန်ဒန် )
Naypyidaw men, including President Thein Sein and Presidential aspirant Shwe Mann, have let 969 grow with the intention of using it asafall group.
They have succeeded in manufacturing themselves as 'democratizers' via the media and Suu Kyi.
They are succeeding again in unleashing organized violence against the Rohingya and the Muslims while deflecting criticism and international scrutiny by having the media go after the disposable neo-Nazi monks such as Wirathu.
Thank you, Western media!!
Posted: 21 Jun 2013 10:15 PM PDT
Extremist Myanmar monk lashes out at Time after being called Buddhism's 'face of terror'
By Associated Press, Published June 21
ဗုဒ္ဓဘာသာအကြမ်းဖက်သမားတွေ ဒုတ်တွေ၊ ဓါးတွေကိုင်ပြီး ရပ်ရွာတွေကို စီးနင်းတဲ့အခါမှာ မြန်မာလူထုက အကြီးအကျယ် ပစ်တင်ရှုံ့ချတာမျိုး မရှိသလောက်ပါဘဲ။
သို့သော် ခပ်ကြမ်းကြမ်းလေးခေါင်းစဉ်နှင့် ဘုန်းတော်ကြီးတစ်ပါးပုံ နိုင်ငံတကာ မဂ္ဂဇင်းတစ်ခုမှာ ပါလာတာကိုတော့ အတော်လေး မခံမရပ်ဖြစ်နေကြတယ်။ (ဝါရှင်တန်ပို့စ်) (U Aung Tin FB)
YANGON, Myanmar — Upon seeing his photo splashed across the cover of Time magazine with the words "Face of Buddhist Terror," Myanmar's most-talked-about monk was unfazed, saying no amount of bad publicity could hurt him.
Nearly 250 people have died and tens of thousands have fled their homes, threatening to destabilize the quasi-civilian government that came to power just two years ago after five decades of military rule."A genuine ruby will shine," said Wirathu, "even if you try to sink it in mud."
"Some people misunderstood the title … seeing it as an insult to religion," said Dr. Yan Myo Thein,apolitical analyst. "They believe it's equating Buddhism with terrorism."
Posted: 21 Jun 2013 09:30 PM PDT
PET+BLOGSPOT is the ONLINE BLOG of the Malaysian Animal-Assisted Therapy for the Disabled and Elderly Association or Petpositive.Our stories are CURRENT, ACCURATE and RELIABLE. We offer both local and foreign news on animals, disability and the elderly. PET+BLOGSPOT was first established in October 2007. Our hits since then are
Posted: 22 Jun 2013 04:21 AM PDT
Malaysiakini melaporkan, walau berdepan kesulitan dan amaran keras pihak berkuasa, Pakatan Rakyat meneruskan acara kemuncak perhimpunan 'Black 505' di Padang Merbok, Kuala Lumpur hari ini.
Penganjur turut mengesahkan turut menerima laporan itu.
4.10pm: Pengerusi Jihad For Justice Datuk Thasleem Mohamed Ibrahim berucap. Beliau menarik perhatian peserta dengan dua buah lagu tamil yang bertajuk "Umno curi", dan "Rosmah buka pintu"
"Ada juga bukti borang 14 yang diwarta SPR tidak sama dengan borang 14 yang diberikan kepada polling agent," katanya.
"Kalau tidak persempadanan ini hanya akan dibuat untuk memberi kemenangan Umno BN sahaja," katanya.
2.20pm: Masjid Negara- Crowd masjid negara suda bergerak dan bergabung dgn crowd dr jln sultan. Memimpin kumpulan dari Sini adalah Dr Dzulkefly Ahmad.
Para pegguna jln raya membunyikan hon sbaik tiba di dpn sogo sbg nyatakan sokongan kpd himpunan black 505. Para peserta kini bersedia bergerak ke Padang Merbok.
1.25pm: Sogo- Dr.mujahid berucap dalm tiga bahasa, Bahasa Inggeris, Bahasa Melayu dan Arab. Beliau berkata himpunan ini bukan kerana Anwar bukan kerana PR tetapi utk masa depan generasi anak cucu kita. Menurutnya, rakyat Malaysia tidak mahu anak cucu terus ditipu dgn SPR.
1.20pm : Sogo- Para peserta masing2 membawa sepanduk yg tertera mesej mgecam spr.
Masing2 memakai baju hitam dgn kain lilit di kepala yg tertera tulisan Blackout 505.
1pm: Universiti Malaya - Seramai kira-kira 100 orang berhimpun di kawasan Masjid Ar-Rahman, di kampus ini.
1205 am: Masjid Negara - Bekas menteri besar Perak Datuk Seri Nizar Jamaluddin, anggota Parlimen Petaling Jaya Selatan Hee Loy Sian dan pemerhati Majlis Peguam yang juga anggota jawatankuasa BERSIH Andrew Khoo kelihatan tiba.
Turut kelihatan tiga anggota polis trafik bagi membantu melancarkan aliran lalu lintas di jalan itu.
Sementara itu MSTAR melaporkan:
Sekumpulan anak muda membawa beberapa kepingan kadbod yang antaranya tertera perkataan "SPR Sila Letak Jawatan", Democracy Is Dead" dan "SPR Should Resign".
Jalan Sultan Hishammuddin di hadapan Masjid Negara mulai sesak.
10.30am: Jalan Sultan - Seramai kira-kira 30 orang mula berkumpul di kaki lima Jalan Sultan sambil memegang bendera PAS DAP dan PKR
Foto-foto dari lensa cenangau:
Akan dikemaskinikan sentiasa.
Posted: 21 Jun 2013 08:58 PM PDT
၀င်းဖေမောင် ။ ။ ဆရာ မြန်မာ နိုင်ငံရဲ့ ပကတိအခြေအနေ သုံးသပ်ပေးပါခင်ဗျာ။
ကျော်ဝင်း ။ ။ Reform က ပြောမယ်ဆိုရင် မြန်တယ်ပေါ့ဗျာ။ မြန်တာက ကောင်းတော့ ကောင်းတယ်ပေါ့။ ဒါပေမယ့် သူနဲ့တွဲပြီးတော့ Institutionalization က လိုက်နိုင်ရင်တော့ ကောင်းတာပေါ့။ အခုဟာ Institutionalization က မလိုက်နိုင်ဘူး။ ဒါကလည်း အပြစ်တင်လို့တော့ မရဘူးပေါ့ဗျာ။ အကြောင်း ကြောင်းကြောင့် ခက်တာဗျ။ တဖက်က အထိန်းအကွပ် မရှိဘူးပေါ့ဗျာ။ Institution က အားမရှိဘူးပေါ့ဗျာ။ Liberalization ကလည်း သိပ်ပြီးတော့ သွက်နေတယ်။ Economic Reform က ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောရရင် လုပ်တော့ လုပ်နေတာပဲ။ ဒါပေမယ့် သာမန်လူထုအတွက် concert အခုထက်ထိ မထွက် ရသေးဘူး။ လူတွေက အရင်အတိုင်းဘဲ။ ဒါပေမယ့် ပြောရေးဆိုခွင့်က များလာတာ။ အဲဒီနှစ်ခုက သိပ်အဟပ်မညီတော့ အချိန်မရွေး ဘရိတ်ပေါက် နိုင်တာပေါ့။ အခုလည်း ခဏခဏ ဖြစ်နေတာ။ အဲလို ပြဿနာတွေ ဖြစ်လာရင်လည်း Institution က အဆင်သင့်ရှိရင် ထိန်းလို့ရတယ်။ အခုမရတော့ လူနဲ့ပဲ ထိန်းနေရတာ။ လူဆိုတာကလည်း ခက်တာက အားလုံးက capacity က သိပ်ပြီးရှိကြတာ မဟုတ်ဘူး။ အကျင့်တွေက အရင်းအတိုင်းဘဲ။ ကြောက်စရာကြီးဗျ။ အချိန်မရွေး ဒါကြီးက ဘရိတ်ပေါက်ပြီးတော့ နောက်ပြန် သွားနိုင်တယ်။ ကျွန်တော်တို့က အဲဒါ စိုးရိမ်တာဘဲ။ ဒီအပြောင်းအလဲလေး ကလည်း ကျွန်တော်တို့ တစ်သက်မကြုံဖူးဘူး။ အေးအေးညောင်းညောင်း ရှေ့ဆက်ကျရင် ကောင်းတာပေါ့။ ဒါပေမယ့် အနေအထားက ပြောလို့မရဘူး။
၀င်းဖေမောင် ။ ။ လွှတ်တော်ရဲ့ performance ကို ဆရာသုံးသပ်ချက်လေး သိပါရစေ။
ကျော်ဝင်း ။ ။ Capacity နိမ့်တယ်လို့ ပြောကြတယ်ပေါ့။ ကျွန်တော်ကတော့ အပြစ်မတင် ပါဘူး။ ကျွန်တော်တို့ဆီမှာ လွှတ်တော်မရှိတာ နှစ်ပေါင်း ၅၀ ကျော်ပြီ။ ကျွန်တော့်အသက်ပဲ ၆၁ ဗျာ။ တော်လှန်ရေးကောင်စီ တက်တုန်းက ကျွန်တော် ဆယ်နှစ်ပဲ ရှိသေးတယ်။ အဓိပ္ပါယ်က ဒီမိုကရေစီ ၁၀ နှစ်သားအရွယ်မီတယ် လို့တောင် ပြောလို့ရတယ်။ ဒီအတွေ့အကြုံတွေ မရှိကြဘူး။ တဖက်က ပညာရေးကလည်း မပြည့်စုံဘူး။ မဆလခေတ်ထဲက သင်ရတဲ့ Political Science က ပညာမှ မဟုတ်တာ။ ၀ါဒဖြန့်ချီရေးပဲ။ ဒီအားနည်းချက်တွေရှိတာ နိမ့်မှာပဲ။ ကျွန်တော်ကတော့ အပြစ်မတင်ပါဘူး။ ပြဿနာတော့ နည်းနည်း ရှိတယ်ပေါ့။ ဆိုးတာက လွှတ်တော်နဲ့ သမ္မတဖြစ်နေတာ။ ဒါကတော့ personal clash ပဲ။
၀င်းဖေမောင် ။ ။ Personal Clash ဆိုတာက
ကျော်ဝင်း ။ ။ ဦးရွှေမန်းပေါ့ဗျာ။ ဦးခင်အောင်မြင့်တော့ မဟုတ်ပါဘူး။
၀င်းဖေမောင် ။ ။ ဦးရွှေမန်းနဲ့ ဖြစ်နေတာဆိုတော့ ဆရာရေ ဘယ်လို Harmony ဖြစ်ရင် ကောင်းမယ်ထင်ပါသလဲ။
ကျော်ဝင်း ။ ။ အမှန်ကတော့ ဖြစ်သင့်တာဗျာ။ သူတို့က တစ်ပါတီထဲကလာတယ်။ တပ်ကနေလည်း လာတယ်။ ဒီလောက်ကြီးတော့ တင်းတင်းမာမာ မရှိသင့်ဘူး ပေါ့ဗျာ။ သဘောထားမှာ တင်းတင်းမာမာ ကွဲစရာအကြောင်းမရှိပါဘူး။ အကြောင်းကြောင်းတွေလဲ ရှိတာပေါ့။ ကျွန်တော်လဲ သေသေချာချာတော့ မသိဘူး။ ဖြစ်နိုင်ချေတွေကတော့ ဦးရွှေမန်းက အထက်ကကိုးဗျ။ အခုတော့ သူ့ဘက်က တစ်မျိုးဖြစ်ချင်ဖြစ်မှာပေါ့။ သူက အောက်ကလည်း ဖြစ်သွားတာ။ အရင် ဦးရွှေမန်းက နံပါတ် ၃ ပဲ။ အဲဒီအောက်မှာ သေသွားတဲ့ ဗိုလ်ချုပ်စိုးဝင်း ရှိသေးတယ်။ ဗိုလ်ချုပ်စိုးဝင်းအောက်မှာ ဦးသိန်းစိန်။ တဆင့်တော့ နိမ့်တယ်။ အပေါ်ရောက်တော့ ဒါကလည်း သူကျေလည်ချင်မှ ကျေလည်မှာပေါ့။ ဒါပဲရှိတယ်။ အဲဒါကြီးကတော့ သိပ်မကောင်းဘူးထင်တယ်။
၀င်းဖေမောင် ။ ။ ဆရာရေ အများစုကတော့ ၂၀၁၅ မှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ရွေးကောက်ပွဲ အနိုင်ရရေး ဦးတည်နေတာ တွေ့ရတယ်။ ဦးရွှေမန်းရော သမ္မတရည်မှန်း ထားတယ်လို့ ထင်ပါသလား။
ကျော်ဝင်း ။ ။ ဖြစ်နိုင်တာကိုး။ သိပ်ဖြစ်နိုင်တာပေါ့။ အဲဒါ ပြဿနာဗျ။ အခုဟာ ကျွန်တော်တို့က စကတည်းက ၂၀၁၅ အတွက် ပူနေတာ။ ၂၀၁၅ မှာ crisis ဖြစ်နိုင်တယ်။ အခုဟာ ၂၀၁၅ မရောက်ခင်ကို ပူနေရပြီ။ Challenge တွေက များတယ်။ ခုဟာ ပြန်ကြည့်တော့ အပြောင်းအလဲတိုင်း Hard Liner နဲ့ Soft Liner ဆိုပြီးတော့ ရှိတာပေါ့။ သမ္မတက မရှိဘူးပြောတာ။ သူကတော့ ဒီလိုတော့ ပြောရမှာပေါ့။ ဒါပေမယ့် ရှိနိုင်တယ်ဗျ။ တခုတော့ ရှိပါတယ်။ Hard Liner တချို့က အပြောင်းအလဲတစ်ခုလုံးကို စိန်ခေါ်လောက်အောင်ထိတော့ သူတို့အင်အားချင်းက မတူဘူး။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ဒီအပြောင်းအလဲက ဦးသန်းရွှေ စတာ။ ဦးသန်းရွှေ ဆန့်ကျင်လောက်အောင် ဘယ်သူမှ လုပ်ရဲမယ် မထင်ပါဘူး။ အဲဒီတော့ Hard Liner ကလည်း ပြောပလောက်အောင် မရှိဘူး။ ဒါပေမယ့် Conservative တော့ ရှိနိုင်တယ်။ ဘာကွာလည်းဆိုတော့ Hard Liner က အပြောင်းအလဲ တစ်ခုလုံးဆန့်ကျင်တယ်။ Conservative က political reform ပဲ ဆန့်ကျင်တယ်။ ဒါပေမယ့် economic reform ကို ဆန့်ကျင်တဲ့အခါမှာ သူ့ Interest တွေရှိတာကိုး။ အဲဒီလို လူမျိုးတွေ ရှိနိုင်တယ်။ ဒါပေမယ့် သေချာတာက အခုချိန်ထိ Hard Liner ပဲ ပြောပြော Conservative ပဲ ပြောပြော သူတို့က အစိုးရဘက်မှာ အပေါ်စီးရဟန်တော့ မရှိဘူး။ အပေါ်စီးက ဦးသိန်းစိန်ပဲ ရထားတာ။ ဦးသိန်းစိန်ကတော့ ရှားရှားပါးပါး လူကောင်းပေါ့ဗျာ။ ဒါပေမယ့် ဒါကလည်း အပြောင်းအလဲ ဖြစ်သွားနိုင်တယ်။ Challenge တွေ သိပ်များလာရင် ဒီ Hard Liner တွေ အပေါ်စီး ပြန်ရောက်ချင် ရောက်သွားနိုင်တယ်။ မသေချာဘူးပေါ့။ အတိုက်အခံဘက်ကလည်း မထူးဘူး။ Moderate ရှိသလို Militant လည်း ရှိနိုင်တယ်။ ဒါပေမယ့် ခုထိက ကံကောင်းတယ်။ Moderate အုပ်စုက အပေါ်စီးရနေတာ။ သို့သော် မြန်မာပြည်မှာ Militant Trend က ကြီးကြီးမားမားကို ရှိတယ်။ အခြေအနေ မကောင်းလို့ ငုံနေတာ။ သူလည်း အချိန်မရွေး ပြန်လာနိုင်တယ်။ အဲဒီအုပ်စုတွေ အပေါ်စီးရသွားရင် အနာဂတ်က မကောင်းနိုင်ဘူး။ ကျွန်တော်ကတော့ ထင်တယ်။ ဒီနှစ်လည်း ကြုံအုံးမှာဘဲ။ လက်ပံတောင်းလို အလားတူကိစ္စတွေ။ အဲဒါတွေ ဘယ်အချိန် ဘရိတ်ပေါက်မလဲ လန့်နေရတာ။ ထိန်းနိုင်သိမ်းနိုင်ကြရင် တော့ ကောင်းတာပေါ့ဗျာ။ ၂၀၁၅ ကတော့ အဆိုးဆုံးပေါ့ဗျာ။ ၂၀၁၅ မှာ free & fair ဖြစ်မဖြစ် မသေချာဘူးဗျ။
၀င်းဖေမောင် ။ ။ ဘာဖြစ်လို့ မသေချာဘူးလို့ ဆရာပြောနိုင်တာလဲ။
ကျော်ဝင်း ။ ။ ဘာဖြစ်လို့မသေချာဘူးဆိုတော့ free & fair တကယ်လို့ဖြစ်ခဲ့ရင် NLD Landslide နိုင်မှာပဲ။ ဒါကလည်း By-election အတွေ့အကြုံပဲ။ အဲလို နိုင်သွားရင် အာဏာလွှဲမလွှဲ မသေချာဘူး။ ဘာလို့ မသေချာလည်းဆိုတော့ Constitution ရှိတယ်။ Constitution က ကာလုံပေါ့ဗျာ။ ကာကွယ်ရေးနဲ့ လုံခြုံရေးကောင်စီပေါ့။ သူက အရေးပေါ် အခြေအနေ ကြေငြာလို့ရတယ်။ ဘာလို့လည်းဆိုတော့ တပ်ကလုပ်ချင် လုပ်လို့ရတယ်။ အဲဒီတော့ နိုင်ပြီးမှ အာဏာမလွှဲရင် သူတို့ နာမည်ပျက်မယ်။ သိက္ခာကျမယ်။ အဲဒါ ညစ်မလား။ ညစ်ရင်လည်း သိက္ခာကျမယ်။ ဒါပေမယ့် ညစ်လိုက်တာက သိက္ခာကျတာ နည်းနည်းတော်အုံးမယ်။ အဲဒီတော့ Larry Diamond တို့က အကြံပေးတာ ရှိတယ်။ Constitution အကုန်လုံး မပြင်နိုင်ရင် အခုလောလောဆယ်မှာ အပေါ်စီးရနေတဲ့ အစိုးရဘက်က ဦးသိန်းစိန်၊ ဒီဘက်က ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တို့ ညှိပါ။ အကုန်းလုံးပြင်ဖို့ မဟုတ်ပါဘူး။ ကာလုံက အရေးပေါ်ကြေငြာလို့ ရတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကို ညှိပါ။ ဒါဆို နိုင်ငံရေး crisis ကို ရှောင်နိုင်တယ်ပေါ့။ လက်တွေ့မှာ အဲသလောက် Practical ကျမယ်လို့ မထင်ဘူး။ ဒီအချိန်မှာတော့ ညှိရမယ်မထင်ဘူး။ ဒီအချိန်မှာတော့ Constitution ပြင်ရေးက သိပ်လွယ်မယ်မထင်ဘူး။ အဲဒီတော့ ဒုတိယက အကြံပေးတာ ကတော့ PR လုပ်ပေါ့ဗျာ။ အဲဒါလုပ်ရင် အာဏာသိမ်းနိုင်မယ့် အလားအလာ သိပ်မရှိဘူး။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ သူက အကုန်လုံးမျှသွားမယ် ဆိုတော့ ဘယ်သူမှလည်း majority နိုင်စရာမရှိတော့ အစိုးရဘက် သိပ်စိုးရိမ်စရာလဲ မရှိဘူး။ အနည်းဆုံး USDP က Strong Opposition အနေနဲ့ ရပ်နိုင်မှာက ကျိန်းသေချင် ကျိန်းသေမှာ။ အခုအနေအထားက free & fair ပေးလိုက်ဆိုရင် Strong Opposition ရချင်မှရမှာ။ NLD ရဲ့ အားက အများကြီးဖြစ်သွား နိုင်တယ်။ ဒီသဘောလေးတွေ ပါကောင်းပါနိုင်တယ်။ အဲဒါဆိုလို့ရှိရင် PR လုပ်တာ အားနည်းချက်က နှစ်ခုရှိတယ်။ တစ်ခုက Extreme အစွန်းရောက် ပါတီမှာလည်း နေရာရသွားနိုင်တယ်။ အထူးသဖြင့် ရခိုင်လို နေရာမျိုးမှာ။ နောက်တစ်ခုက Constitution ပြောင်းရေး။ အခု ပြောင်းရေးမဟုတ်ပါဘူး။ အခွင့်သာရင် ပြောင်းဖို့။ ပြောင်းဖို့မှာ ဘယ်သူမှ Majority မရဘူး။ အဲဒီဟာတွေ တော့ အားနည်းချက်ရှိတယ်။ နောက်ပြီးတော့ NLD လက်ခံနိုင်မှ။ NLD က လက်မခံရင်လည်း ဒေါ်စုကိုယ်တိုင်က Radical ပြန်ရောက်သွားနိုင်တယ်။ NLD က လက်မခံဘူးဆိုတာက သူတို့က သဘောပေါက်တာက Larry Diamond ပြောတာ သူတို့မသိဘူး။ ဦးဝင်းတင်လည်း မသိဘူး။ သူတို့သိတာ ဦးခင်မောင်ဆွေ တင်တာလို့သိတာ။ By-election result ကို မနာလိုမရှုဆိမ့်လို့ ထင်တယ်လို့ ထင်နေတယ်။ ဒီလိုစဉ်းစားရင် သူတို့ တိမ်တယ် (ဒေါ်စုဘေးက လူတွေက) အဲဒီတော့ သူတို့က Object လုပ်ဖို့ရှိတယ်။ အဲဒီ Object ထဲမှာ ဒေါ်စုပါသွားရင် နောက်ထပ် ဒါလည်း crisis တစ်ခုဘဲ။ အဲဒီတော့ ချုပ်လိုက်ရင် PR လုပ်ရင်တော့ အာဏာသိမ်းမယ့် အန္တရာယ်တော့ ကျော်လွှားနိုင်တယ်။ ဒါပေမယ့် ရေရှည်မှာ ခက်သွားမယ်။ ပိုဆိုးတာ NLD လက်မခံလို့ရှိရင် crisis တွေ ဘာတွေပါလာမယ်။ ခက်တာက အခုချိန်ထိ (၂)နှစ်ပဲ ကျန်တော့တယ်။ ဒီ (၂)နှစ်အတွင်းမှာ ဒါကို NLD အပါအ၀င် အတိုက်အခံဘက်က ဘယ်သူမှ တပြေးညီ မရှိကြဘူး။ အစိုးရဘက် ဘယ်လိုတွေ ခြေလှမ်းတွေလည်း ကျွန်တော်တို့ မသိနိုင်ဘူး။ နောက်ထပ် ဖြစ်နိုင်ချေ အလားအလာ တစ်ခုက ဦးရွှေမန်းရဲ့ ခြေလှမ်းတွေ။ သူက ကစားဖို့တော့ ကြိုးစားနေတယ်။ သူကစားဖို့ ကြိုးစားတာက သူက ပထမ နိုင်ဖို့ပေါ့။ မနိုင်ရင် Strong Opposition ဖြစ်ဖို့၊ အဲဒီအတွက်လည်း သူ့ခြေလှမ်းတွေ နည်းနည်းတွက်လို့ရတယ်။ ဘာဖြစ်လို့ လည်းဆိုတော့ ကိုကိုကြီးကို သိသိသာသာ ပွဲထုတ်တာ တော်တော် ရည်မှန်းချက် ရှိတယ်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့အပြိုင် figure မွေးတာပေါ့ဗျာ။ အတိုက်အခံ မဲကွဲအောင်လို့ အပြင်ရောက်နေတဲ့ လူ့ဘောင်သစ်ကို တွဲခေါ်သွားတာ။ အဲသလိုမျိုး သူကစားနိုင်လို့ NLD မဲကွဲပြီး Landslide မရဘူး ဆိုရင်တော့် USDP က Strong Opposition ဖြစ်မှာ မဟုတ်ဘူး။ ဒါဆိုလည်း အေးအေးညောင်းညောင်း ပြီးချင်ပြီးသွားမှာ။ အဲဒီတော့ ဘယ်လိုဖြစ်မယ်ဆိုတာ တော့ မသိသေးဘူး။ ကျွန်တော်တို့ ဖြစ်စေချင်တာကတော့ USDP က PR သုံးသုံး မသုံးသုံး ကိုယ့်ဘက်ကတော့ တပ်ပေါင်းစုတော့ လုပ်စေချင်တယ်။ တပ်ပေါင်းစု လုပ်လိုက်ခြင်းအားဖြင့် PR သုံးရင်လည်း တကယ်လို့ ပြင်ဖို့လိုအပ်လို့ ပြင်ခွင့်ရလို့ ပြင်တော့မယ်ဆိုရင် တပ်ပေါင်းစုအနေနဲ့ majority ရနိုင်တယ်။ နောက်အစိုးရပါတီတွေ ၀င်တော့လည်း တပ်ပေါင်းစုနဲ့ ကာရင်တော့ ရနိုင်တယ်။ သို့သော် တပ်ပေါင်းစုလုပ်ဖို့ ဆိုရင်တော့ ဒေါ်စု အပါအ၀င် NLD ပြင်ရလိမ့်မယ်။ By-election တုန်းက ပုံစံလုပ်လို့ မရဘူး။ လူမျိုးစုကိစ္စတွေမှာ ၀င်ပြိုင်တာမှားတယ်။ ကျွန်တော်ကတော့ အဲလိုဘဲမြင်တယ်။ လူမျိုးစုကိစ္စ (၂) နေရာ (၃) နေရာလောက် လွှတ်ပေးလိုက်ပေါ့ဗျာ။ အဲဒီတော့ လူမျိုးစုတွေ သူ့သဘောထား မကောင်းဘူး။ ခုအချိန်မှာ တပ်ပေါင်းစုဖွဲ့ဖို့တောင် နည်းနည်း ခက်နေတာ။ ရနိုင်ပါသေးတယ်။ ဒေါ်စုသာ ဦးဆောင်လို့ရှိရင်။ ဒါပေမယ့် နည်းနည်းတော့ ခက်သွားပြီ။ လူမျိုးစုတွေက သူ့အပေါ် သဘောထား သိပ်မကောင်းချင်ကြဘူး။ သူလည်း မာမာဘဲ ဆိုလို့ရှိရင် အန္တရာယ်ကြီးတယ်။ ဦးခင်မောင်ဆွေတို့ဆို ကိုယ့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက် တွေပဲဗျာ။ ထောင်ကျဖော် ကျဖက်တွေဘဲ။ ဒီလောက် သဘောထားမတင်းမာသင့်ဘူးလို့ ထင်တယ်။ တစ်ပါတီထဲ မစုနိုင်အောင် တပ်ပေါင်းစုတော့ စုသင့်တယ်။ By-election အတွေ့အကြုံအရဆိုရင် ပါလီမန် အတွေ့အကြုံရှိတာ ကျန်ကောင်းကျန်နိုင်တာ တစ်ယောက်ရှိတာ။ ဦးသုဝေပဲ။ ဒီလိုလူမျိုးကိုတော့ လက်ရှောင်ပေးသင့်တယ်။ အဲသလောက် လောဘကြီးလို့ရှိရင် နိုင်ငံရေးက တပ်ပေါင်းစုနိုင်ငံရေး သွားလို့မရဘူး။ သူ့အဖေ သင်ခန်းစာယူဖို့ ကောင်းတယ်။ သူ့အဖေဆိုရင် ဖဆပလတွေ သွားလို့ရတာပေါ့။ ဒါပေမယ့် ဘေးရောက်နေတဲ့ ဦးဘဖေတို့လို လူမျိုးတောင် ဆွဲခေါ်တာ။ စုနိုင်သမျှ အင်အားစုကို စုစည်းရဖို့ဆိုရင် မမြင်ဘူး။ ဒါမျိုးသိပ်မရှိဘူး။ အဲဒါလည်း ခွကျတယ်။
၀င်းဖေမောင် ။ ။ ဆရာရေ ဦးရွှေမန်းသာ election မှာနိုင်ဖို့ ဦးတည်ချက်ထားမယ်ဆိုရင် trade-off တွေက ဘာတွေဖြစ်လာနိုင်သလဲ။
ကျော်ဝင်း ။ ။ အဲဒီမှာ ပြဿနာက သူနဲ့ ဦးသိန်းစိန်ရဲ့ ပဋိပက္ခက သူတို့ရပ်တန်းက မရပ်နိုင်ရင် USDP နှစ်ခြမ်းကွဲမှာ။ နှစ်ခြမ်းကွဲရင်တော့ NLD ဘက်က နည်းနည်း ကောင်းသွားမျာ။ ခုအတိုင်းကတော့ သူတို့ ဘရိတ်မအုပ်ကြဘူးဗျ။ USDP နှစ်ခြမ်းကွဲမလား (သို့) ဦးသိန်းစိန် ထွက်မလား။ ဒါလည်း မသေချာဘူး။ တပ်ပေါင်းစုသာ သွားနိုင်မှ ဖြစ်မှာ နို့မဟုတ်လို့ရှိရင် NLD ကို check and Balance လုပ်နိုင်တဲ့သူ မရှိဘူး။ မရှိတော့ သူလည်း မကောင်းဘူး။ ပါတီငယ်လေးတွေကလည်း Marginalize ဖြစ်မယ့် အန္တရာယ်လည်းရှိတယ်။ By-election အတွေ့အကြုံအရ ကျွန်တော်ကတော့ တပ်ပေါင်းစုပဲ သွားစေချင်တယ်။ ပါတီတစ်ခုချင်းတော့ သိပ်မပြောချင်ဘူးဗျ။ NLD ကစပြီး ပါတီတိုင်းမှာ အားနည်းတယ်။ ဒါလည်း သဘာဝကျပါတယ်။ Institution က နိုင်ငံတော်မှာတင် မဟုတ်ဘူး။ ပါတီမှာလည်း လိုတယ်။ ပါတီ Institution ဟိုတုန်းကစကားနဲ့ ပြောမယ်ဆိုရင် လက်ဝဲဘာသာစကားပေါ့ဗျာ။ ပါတီ တည်ဆောက်ရေး ဘယ်ပါတီလုပ်နိုင်လို့တုန်း။ လုပ်ရကောင်းမှန်းကို မသိကြတာ။ ခက်တော့ခက်တယ်ဗျ။
၀င်းဖေမောင် ။ ။ ဆရာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သာ ဦးခင်မောင်ဆွေတို့ ဦးသုဝေတို့နဲ့ လက်တွဲနိုင်ရင် အမျိုးသားအကျိုးစီးပွား ဦးတည်နိုင်တယ်ပေါ့။
ကျော်ဝင်း ။ ။ ဟုတ်တာပေါ့။ ကောင်းသွားနိုင်တယ်။ ပြီးတော့မှ USDP နဲ့ အပေးအယူ လုပ်ပေါ့ဗျာ။ USDP နဲ့ deal ကိုတော့ လုပ်ရမှာပဲ။ တဖက်သတ် ကန့်လန့်ချလို့ တော့ မရဘူး။ deal လုပ်ဆိုတာတော့ တပ်ကိစ္စ။ တပ်ကလည်း အဆောတလျင် တပ်သုတ်ရိုက်မလုပ်နဲ့ဗျ။ ပြီးတော့ တပ်ကရှိနေတာ မြန်မာပြည်မှာ ပြည်တွင်းစစ် အခံလဲရှိတယ်။ အဲဒီ ပြည်တွင်းစစ်က တပ်ဖက်ကစဉ်းစားရင် မှန်သလောက်မှန်တယ်။ ဗကပ မရှိတော့တဲ့နောက် လူမျိုးစု လက်နက်ကိုင် အားလုံးပေါင်းရင် တစ်သိန်းကျော်တယ်။ လူဦးရေ အချိုးအစားနဲ့ တွက်လို့ရှိရင် မြန်မာပြည်က သူပုန်အများဆုံး။ ဒီအနေအထားအောက်မှာ စစ်တပ်က လုံခြုံရေးကြီးတော့ မစဉ်းစားနဲ့။ ဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာ တပ်ကို ဘားတိုက်ပြန်တော့ ပြောရင် ဘယ်သူမှလက်ခံနိုင်မှာ မဟုတ်ဘူး။ တကယ့် လက်တွေ့မှာလည်း တပ်ဘားတိုက်ပြန်လို့ရှိရင် မြန်မာပြည်ဟာ အစိပ်စိပ် အမွှာမွှာ ကွဲကုန်နိုင်တယ်။ ဘောလ်ကန်နိုက်ဇေးရှင်း အန္တရာယ် တိုးနိုင်တယ်။ တို့လူမျိုးစုတွေရဲ့ အစွဲအလန်းနဲ့ တင်းမာမှုနဲ့ဆို ပြောလို့မရဘူး။ အဲဒီတော့ ပြည်တွင်းစစ်ရပ်စဲရေး မရသေးခင်တော့ အလားအလာ မရှိသေးခင်တော့ တပ်က လုပ်လု့ရမယ်ထင်တယ်။ မရတဲ့အတူတော့ မလုပ်ဘဲနဲ့ တပ်ကို တတ်နိုင်သလောက် minimize လုပ်ဖို့လိုတယ်။ Demilitarize လုပ်ရမှာဘဲ။ ဒါလည်း ပါးပါးနပ်နပ်မှ။ ဒါပေမယ့် အဲဒီပါးနပ်မှုက ဒေါ်စု ရှိမယ်ထင်တယ်။ ဒေါ်စု လွှတ်တော်ထဲဝင်ပြီး နောက်ပိုင်း အရင်ဒေါ်စုနဲ့ မတူတော့ဘူး။ အများကြီး ပျော့ပျော့ပြောင်းပြောင်း ဖြစ်သွားတယ်။ အများကြီး ပြောင်းသွားတယ်။ ဒါလိုအပ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်လည်း ဒေါ်စုကို ဘာနဲ့မှ အစားထိုးလို့ မရတာ။ ကျွန်တော်တို့ဆီမှာ အစဉ်အလာ ခေါင်းဆောင်အားလုံးက အနည်းနဲ့အများ လက်ဝဲသြဇာကြီးတယ်။ Radical ဘက်ကိုဖြစ်တယ်။ ပြီးတော့ Democratic နဲ့ ways of thinking နဲ့ သိပ်ပြီးတော့မကိုက်ဘူး။ Liberal Minded မရှိဘူး။ ရှားရှားပါးပါး ဒေါ်စုတစ်ယောက်ပဲရှိတာ။ ဒါကလည်း ဒေါ်စု ပညာရေး ကောင်းခဲ့လို့ သူ့နေရာကို ဘယ်သူမှ အစားထိုးလို့မရဘူး။ သူတောင်မှ Radical အငွေ့အသက်တွေက သိပ်ကင်းတာမှ မဟုတ်ပဲ။ အခုနောက်ပိုင်းမှသာ ကျွန်တော်တို့လူထုရဲ့ အခံကလည်း Radical အခံကြီးတယ်။ လက်ဝဲသြဇာ ကလည်း ကြီးတယ်။ လက်ဝဲကို ကွန်မြူနစ်ဆန့်ကျင်ရေးသမားလို့ ကိုယ့်ကိုကိုယ် ထင်တဲ့လူကိုက စဉ်းစားတော့ လက်ဝဲ ways of thinking ထဲက မထွက်ဘူး။ ဒါတွေကလည်း ပြဿနာပဲ။ ဒါကြောင့် အခု ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ခြေခြေမြစ်မြစ်ပြောတော့ သူ့ကို လူအကြိုက် သိပ်မများတော့ဘူး။
၀င်းဖေမောင် ။ ။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ အားနည်းချက် ဘာတွေဖြစ်လာနိုင်သလဲ။
ကျော်ဝင်း ။ ။ အားနည်းချက်ကတော့ သူလည်းပဲ မြင်တာပါပဲ။ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောရင် မဟာဗျူဟာ သိပ်မရှိဘူးလို့ ထင်တယ်ဗျာ။ ဒါပေမယ့် သူ့မျာက Liberal Minded ရှိတာလေးပဲသိတယ်။ နိုင်ငံရေးမှာတော့ မဟာဗျူဟာမြောက် စဉ်းစားတာမျိုးတော့ နည်းတယ်ဗျ။ ဒါလည်း သဘာဝကျတယ်။ သူနိုင်ငံရေးမှ မလုပ်ဖူးတာ။ သူ့အနေနဲ့ အဲဒါတွေ ကွာတာကိုး။
၀င်းဖေမောင် ။ ။ ဦးသိန်းစိန် အနေနဲ့ရော ဘယ်လိုမူဝါဒမျိုးတွေ ချမှတ်သင့်ပါသလဲ။
ကျော်ဝင်း ။ ။ မရဘူးဗျ။ သူလုပ်နေတာ ယေဘုယျအားဖြင့် လမ်းကြောင်းမျန်လို့ ပြောလို့ရတယ်။ ဒါပေမယ့် အားလုံးက capacity နိမ့်နေကြတယ်။ အချိန်ယူရမှာ ပဲ။ Gradual နဲ့ပဲသွားလို့ရမယ်။ မြန်မြန်ဆန်ဆန် လုပ်လို့မရဘူး။ ဦးသိန်းစိန် ကလည်း တပ်ကဆိုတော့ တပ်အစွဲရှိတယ်။ တပ်က တပ်အချင်းချင်းပဲ ယုံတာ။ အပြင်လူကို မယုံဘူး။ အဲဒီတော့ နိုင်ငံရေးအကြံပေးခေါ်လို့ရရှိရင် တပ်ကပဲ ခေါ်တာ။ အပြင်လူမပါဘူး။ စီးပွားရေးအကြံပေးတော့ အပြင်လူပါတယ်။ နောက်ထပ် အရေးကြီးတာတစ်ခုက conservative တွေရှိတာ။ conservative တွေကို တည့်တည့်ပြောရမယ်ဆိုရင် အစိုးရအဖွဲ့နဲ့ လွှတ်တော်ထဲမှာ သိပ်မရှိဘူး။ ပြီးတော့ ဦးရွှေမန်းကိုယ်တိုင်ကိုက သူ့မှာ interests တွေ အများကြီးရှိတယ်။ အဲဒါ စီးပွားရေးပြုပြင် ပြောင်းလဲမှုရဲ့ အကြီးဆုံး အဟန့်အတားဖြစ်နိုင်တယ်။ အဲဒါ သမ္မတအတွက် တကယ့်စိန်ခေါ်မှုပဲ။ နောက်ပြီးတော့ ကာလုံကို ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးဦးသန်းရွှေ ကိုယ်တိုင်ခန့်ထားတာ။ သူကတော့ အာဏာသိမ်းချင်တောင်မှ သူ့သဘောနဲ့သူ သိမ်းဖို့သိပ်မလွယ်ဘူး။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ သူက သိပ်ဝါနုတာကိုး။ ပြီးတော့ သူကသူ့တပ်ကို မကိုင်နိုင်တဲ့ လူတွေရှိတယ်။ လူဝတ်လဲထားတဲ့ လူတွေရှိတယ်။ အဲဒီလူတွေ (Hard Liners) တွေက အများကြီးဘဲ။ အဲဒီလူတွေက ဦးရွှေမန်းဘက်ကလူတွေ ဖြစ်နေတာ။ ဒီပြဿနာကတော့ အကြီးကြီးဘဲ။ ဒါပေမယ့် မှန်းဆကြည့်တာ သမ္မတနဲ့ ကာလုံနဲ့ကတော့ အသွင်းချင်းကတူတယ်။ အဲဒီ Power struggle ကလည်း ကြောက်ရတယ်။ ဒါပေမယ့် ဦးရွှေမန်းက နိုင်ငံရေး ကစားချင်တဲ့ သဘောရှိတယ်။ ကစားသွားရင် သိပ်မစိုးရိမ်တော့ဘူး။ အာဏာက ဘယ်သူရရ စိတ်မ၀င်စားတော့ဘူး။ ဒါပေမယ့် တိုင်းပြည်နောက်ကြောင်းမပြန်ရင် တော်တာပဲ။ ကစားတာ အောင်မြင်ရင်တော့ သူ့ကို အားပြန်ကိုးရတာပေါ့။ သူ့ကြည့်ရတာတော့ ပြန်အာဏာသိမ်းချင်တဲ့ပုံစံ မတွေ့ရဘူး။ ဒါပေမယ့် သူ့နောက်က လူတွေအားလုံးက လက်ယားနေတာကြာပြီ။ ဒီလူတွေကတော့ ပြောမရဘူး။ စစ်တပ်ဆိုတဲ့သဘာဝက ကိုယ်ကဘဲ အနိုင်ယူချင်တာပေါ့။ အခုဟာ သမ္မတကရော ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ကရော မတိုက်နဲ့ဆိုတော့ အကျအဆုံးက တော်တော်များတယ်။ အဲဒါလည်း ဘရိတ်ပေါက် သွားနိုင်တယ်။
၀င်းဖေမောင် ။ ။ ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ် ဆရာ။